မကွောကျပါနဲ့ – My Blog
သရကျမွို့ ဟိုကျစကူးကြောငျးကွီးမှာ မွို့၏ အနောကျမွောကျစှနျး တောငျကုနျးကလေး တဈခုပျေါ၌ သပျရပျလှပမှုဖွငျ့ တငျ့တယျ စှာ ရှိနပေါသညျ။ မွောကျဘကျဘောလုံးကှငျး၊ တပျကှငျး၊ လှငျပွငျမြားဆီမှ တိုကျခတျလာသော လပွေအေေးမြားမှာလညျး သနျ့ရှငျးစငျကွယျ သညျနှငျ့အမြှ အေးမွလှသညျ။ ထိုလပွေအေေးတို့ကို တိုကျခတျခံရငျး ကြောငျးဘေးပတျလညျ၌ ပွေးကာခုနျ ကာ ကစားနကွေသော ကလေးသူငယျ အရှယျပေါငျးစုံမှာလညျး ရှငျရှငျမွုးလြှကျ ပြျောမွူးနကွေသညျ။ ကြောငျးဘေး ပတျလညျ တှငျ စီတနျးလြှကျ စိုကျပြိုးထားသော ဇလပျပနျးမြားမှာလညျး ရာသီမရှေး အပှငျ့အဖူးမြားဖွငျ့ ဖွူဖွူဖှေးလြှကျ ရှိနကွေသညျ။
ကြောငျး၏ မွောကျဘကျသို့ ထိုးထှကျဆောကျလုပျထားသော ခနျးမဆောငျကွီး ဘေးပတျဝနျးကငျြရှိ ဇလပျပငျမြားသညျ ပိုပို၍ပငျ ပှငျ့နကွေသညျ။ အပငျတိုငျး၏ အောကျတှငျ ဇလပျပှငျ့မြားသညျ ကွှကေလြှကျ ကောကျသူ ပနျသူမြားကို ငံ့လငျ့လဲလြောငျးကာ ရှိ နကွေသညျ။ ထိုခနျးမကွီး၏ အရှဘေ့ကျ ကလေးမြား အနညျးငယျရှငျးရာ အုတျလှခေါးထဈဘေး ဇလပျပငျတှငျ ၁၂နှဈ ၁၃နှဈ အရှယျ ကလေးမလေး ၅ယောကျကို မွငျနိုငျပါသညျ။ ၄ယောကျမှာ အပငျမြားအောကျ၌ ကွှကေနြသေော ဇလပျပှငျ့မြားကို ကောကျကာ ကွိုးဖွငျ့ သီကုံးနကွေသညျ။ ထိုအထဲမှ တဈယောကျကတော့ အခွားကလေးမြားနှငျ့ မတူ အပငျအောကျ၌ ကွှကေနြေ သော အပှငျ့လေးမြားကို သတိပငျမပွု အဖကျမြှမလုပျပဲ အပငျမွငျ့ထကျမှာ ရှိနသေညျ့ အပှငျ့မြားသို့သာ အာရုံပွုရငျး ခွဖြေားလေး ကို မမှီ့တမှီထောကျကာ လှပခြေ့ောပဆေို့သညျ့ ပနျးမြားကိုသာ ရှေးကာခူးဆှတျရငျး သီကုံးနလေသေညျ။
အတနျကွာလြှငျ အောကျ၌ ပနျးကောကျနသေော သူမြားထဲမှ တဈယောကျစနှဈယောကျစ ထလာကွကာ … “ပနျးလေးတှကေသိပျလှတာပဲကှယျ .. မူတော့အိမျကြ မမကိုပေးဖို့ တဈကုံးရပွီဆရာ .. “ “အို .. ကိုယျတော့ဆရာ မမေကေို့ပေးမယျ” “အို .. ငါတော့ဆရာ ဘုရားကို တငျမှာ” “အမယျ .. ငါတော့ဆရာ . .ဘယျသူ့မှမပေးဘူး။ အိမျနားကဒျေါခငျတုတျကို ၂ပွားနဲ့ရောငျးမယျဆရာ။ ဒါမှမုနျ့ဝယျစားရ မယျ” ၁၂နှဈ၁၃နှဈအရှယျ ကလေးမမြားမှာ သူတို့လှဖို့ထကျ သူတို့နှငျ့ ပကျသကျသညျ့ အကွီးမြားလှဖို့၊ ဘုရားတငျဖိုံ့၊ မုနျ့ဖိုးရဖို့မြှ သာ တှေးတတျလြှကျ၊ တဈဦးစီ ကိုယျ့ရညျရှယျခကျြကို ကိုယျဖျောပွနကွေသလောကျ မတျတပျရပျလြှကျမှ ခူးရငျး သီကုံးနသေညျ့ ကလေးမလေးကတော့ သူတို့အားလုံးကို မကျြလုံးလေးစှကွေညျ့ရငျး သူမသီကုံးပွီးထားသော ပနျးကုံးကိုလညျး လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ခေါငျးထကျမှာ သီကာဝိုကျပနျလြှကျ …
“ဟေ့ မလှလား … ကွညျ့ပနျးတှကေသိပျလှတယျဆရာ၊ အောကျကပြွီးသားလဲ မဟုတျဘူး” ထိုသို့အပွောလိုကျတှငျ အားလုံးသော ကလေးမမြားမှာ သူမဘကျသို့ လှညျ့လြှကျ ကွညျ့လိုကျကွသညျ။ “ဟေ့ . ကွညျကသိပျလှတာပဲကှယျ . နျော” မနာလိုဝနျတိုစိတျ အလြှငျးမရှိကွသေးသော အရှယျမြား ဖွဈသညျ့အလြှောကျ ဖှံ့ဖှံ့ကားကား ဖွူသှယျတနျးလြှကျ ကလေးမလေးအလှကို ဝကောဆငျ့ နသေညျ့ ပနျးကုံးကိုကွညျ့လိုကျ၊ ပနျးပနျသူကို ကွညျ့လိုကျဖွငျ့ အားလုံးသော ကလေးမလေးမြားမှာ သဘောကနြကွေသညျ။ သို့သျောက လေးအရှယျဘာဝ အလှတှငျသာ အမွဲမနဈမွောတတျ၊ ကစားဖို့ကလဲ ရှိပါသေးသညျ။ “လာကှယျ .. ဟိုဘကျကစားရုံ ထဲ သှားကစားရအောငျ” ထိုထဲမှ တဈယောကျက စလိုကျသညျ။ “အေး လာသှားကစားမယျ” ထိုတဈယောကျကို ကနျြသုံး ယောကျက မဖငျ့မဆိုငျး ထောကျခံသလောကျ ကွညျဆိုသော ကလေးမကတော့ ထိုတဈယောကျကို ကနျြသုံးယောကျက မဖငျ့မ ဆိုငျး ထောကျခံသလောကျ ကွညျဆိုသော ကလေးမကတော့
“ဟငျ့အငျးကှယျ .. ကွညျတော့မကစားခငျြဘူး၊ အဲဒီမှာ ကောငျကလေးတှနေဲ့” သူမမှာ အပြိုကလေးလိုဟနျဖွငျ့ သညျအပွောတှငျ မကျြလုံးကလေးက စှလေိုကျပါသေးသညျ။ “ဒါဖွငျ့ မူ တို့သှားကစားမယျ ကွညျ့ဖာသာနရေဈ” ကစားဖို့ အဖျောစပျတိုငျး ကောငျကလေးတှကေို အကွောငျးပွတတျသော မွငျ့မွငျ့ကွညျ ကို ကနျြကလေးမလေး ၄ဦးမှာ မွငျပွငျးကတျသလိုဖွငျ့ တဈယောကျတညျး ထားခဲ့လြှကျ အနိမျ့ဖကျဆီရှိ ကစားရုံဖကျသို့ ကလေး မြားပီပီ အပွေးကလေး လာခဲ့ကွသညျ။ ကစားရုံနားရောကျမှ အပွေးရပျလြှကျ … “သူက ကောငျကလေးတှနေဲ့လေးဘာလေးနဲ့ ကွီးကယျြလိုကျတာ၊ သူက သူ့ရညျးစားနဲ့မှ စကားပွောခငျြနတောဆရာ” ထိုအထဲမှ ကလေးမတဈယောကျက စ၍အပွောလိုကျ တှငျ …
“ဟုတျပါရဲ့၊ သူက ရညျးစားနဲ့ဆရာ .. “ ဟုအားလုံးက ထောကျခံလိုကျသညျ။ သူတို့အရှယျတှငျ ရညျးစားဟူသညျ့ စကား အဓိပ်ပါယျကို ပွညျ့စုံစှာ နားမလညျသေးသျောလညျး မိနျးကလေးတဈဦးနှငျ့ ယောကျြားလေးတဈဦး ရငျးနှီးစှာ ပေါငျးနမှေုကိုတှလြေှ့ငျ သို့သျော ကလေးပီပီကစားရငျး ရငျးနှီးစှာ ပေါငျးခငျြးမြိုးမဟုတျပဲ အရှယျနှငျ့မမြှ ဟနျပနျမြားလြှကျ ကလေးမဆနျသော အမူ အယာမြိုးနှငျ့ ရောနှောနလြှေငျ ရညျးစားဟု မှတျယူစှပျစှဲတတျကွခွငျး ဖွဈသညျ။
သူတို့အားလုံး ကစားရုံထဲသို့ဝငျစတှငျ မွငျ့မွငျ့ကွညျသညျ ထိုငျ၍ကနျြခဲ့ရာဖကျသို့ လှမျးကွညျ့မိသညျ။ ဟုတျပါသညျ။ ၁၂နှဈအရှယျ မွငျ့မွငျ့ကွညျမှာ ယောကျြားလေးမြားသာ ကစားရုံထဲသို့ မလိုကျခငျြဟု ပွောပွီးနခေဲ့လြှကျ သူမဘေးမှာတော့ ၁၄နှဈ အရှယျကောငျလေး တဈယောကျက ထိုငျနပေါသညျ။ ထိုကောငျလေး၏ လကျထဲတှငျ ကြောငျးရှေ့ ပနျးခွံတှငျး၌သာ ရှိလြှကျ မာလီ အလဈတှငျသာ ခိုးယူရနိုငျသော နှငျးဆီနီရဲရဲလေး တဈပှငျ့ကို ကိုငျလြှကျ မွငျ့မွငျ့ကွညျသို့ လှမျးပေးနလေသေညျ။ သညျပနျးကိုပငျ ၁၂နှဈအရှယျ မွငျ့မွငျ့ကွညျက မကျြနှာကလေးငုံ့ကာ မကျြလုံးကလေးကိုစှလြှေကျ ကွာမူပါပါဖွငျ့ လှမျးယူနတေော့သညျ။ ဒါ ကတော့ မွငျ့မွငျ့ကွညျတဈယောကျ လူမမယျ ကလေးဘဝ အသကျ၁၂နှဈ အရှယျကပငျ ဖွဈပါတော့သညျ။
ငယျစဉျကပငျစ၍ အလှကွိုကျမှု အကောငျးကွိုကျမှုမြားဖွငျ့ နဈမှနျးလြှကျ မိဘအမွှောကျအစားကိုခံကာ ပကျြစီးခဲ့ရသောသူမ၏ ပေါ့လြော့သောစိတျဓါတျတှငျ ငယျစဉျကပငျ ရညျးစားထားခငျြသညျ့ စိတျဓါတျဖွငျ့ ၁၄နှဈဝငျခါစကပငျ အတနျးတူကစားဖကျ လူလှ လူခြော လူခနျ့ကလေး မောငျမွနှငျ့ ခဈြကွိုးသှယျလြှကျ ရညျးစားဖွဈခဲ့လသေညျ။ ၁နှဈ၂နှဈဆိုသော အခြိနျကာလသညျ ကြောငျး တကျ ကြောငျးဆငျးရငျးဖွငျ့ပငျ တဈရကျပွီးတဈရကျ တဈလပွီးတဈလ တဈနှဈပွီး တဈနှဈ ပွောငျးလဲ၍ လာခဲ့ခပြွေီဖွဈပွီး ယခု ဆိုလြှငျ မောငျမွဦးက ၁၈နှဈ၊ မွငျ့မွငျ့ကွညျက ၁၇နှဈကြျောခဲ့ပပွေီ။ ဒီနှဈကုနျ၍ စာမေးပှဲအောငျလြှငျ သူတို့သညျ တက်ကသိုလျ ပညာရေးကို တကျလှမျးကွ ပတေော့မညျ။
ငယျငယျကတညျးက ခန်ဓာကိုယျ ထှားထှားကွိုငျးကွိုငျးဖွငျ့ ဖှံ့ဖွိုးကာ အလှတှတေိုးနခေဲ့သော မွငျ့မွငျ့ကွညျသညျ ယခု ၁၇နှဈ ကြျော အရှယျတှငျတော့ ငှားငှားစှငျ့စှငျ့ အစှမျးကုနျ ပှငျ့နသေညျ့ ပနျးလေးတဈပှငျ့နှယျ အလှသှေးတှေ ကွှယျကာ လှခငျြတိုငျး လှ၍ နပေတေော့သညျ။ သူမ၏ ခန်ဓာကိုယျမှာ အရှယျနှငျ့မမြှအောငျ ဖှံ့ဖွိုးလာသညျ့နညျးတူ သူမ၏ အတှငျးစိတျမြားနှငျ့ သှေးသား မြားသညျလညျး ခန်ဓာကိုယျနှငျ့ လိုကျလြှော ညီထှစှော ဖှံ့ဖွိုး၍လာခဲ့ပပွေီ။ သညျမှာတငျ ဖွဈလဖွေ့ဈထ ရှိတတျသညျ့အတိုငျး ဆန်ဒ တညျးဟူသော အလိုရမ်မကျသညျ သူမ၏ရငျထဲတှငျ ပေါကျဖှား တညျရှိ လာလတေော့သညျ။ သူမတငျပဲလားဆိုတော့လဲ မဟုတျပါ။ မွဦးက သူမထကျပငျ အသကျတဈနှဈမြှ ကွီးသူဖွဈ၍ သူလညျးပဲ မွငျ့မွငျ့ကွညျနညျးတူ ရငျထဲတှငျ ဆန်ဒတရားတို့သညျ ကိနျးအောငျးဖွဈတညျလြှကျ ရှိနပေသေညျ။
“ကွညျကွညျ မနကေ့ ညနကေ ဘာလို့မလာတာလဲ။ ကိုကိုဦးဖွငျ့ စောငျ့လိုကျရတာ” “ပငျြးလို့ပါ ကိုကိုဦးရာ၊ တနတေ့နေ့ ဒီစကား တှခေညျြး ထိုငျထိုငျပွီးပွောနရေတာ။” “အို ကိုယျ့ရညျးစားမကျြနှာကိုကွညျ့ပွီး အတူထိုငျနရေတာပဲ ကွညျကွညျရာ၊ ပြျောစရာ ကောငျးပါတယျ” “ဟငျ့အငျး၊ ကွညျတော့ပငျြးတယျ။ နောကျဆို ကိုကိုဦးချေါရငျ မလာတော့ဘူး” “ဟငျ .. ဒါဆိုဘယျလိုလုပျရမ လဲ” ရိုးအလှသူ မွဦီးမှာ ရငျထဲရှိသညျ့အတိုငျးပငျ ပွောခလြိုကျသညျ။ သူ၏ရငျထဲတှငျလညျး တကယျပငျ ညဈညူး၍ ကွံရာမရဖွဈ သှားရသညျ။
“ကိုကိုဦးကလဲ၊ သူမြားသမီးရညျးစားတှဆေို သိပျပြျောဖို့ ကောငျးတာပဲဟာ .. ကွညျသှားတော့မယျ” မွဦးကိုကြောခိုငျးပွီးမှ အသံ ကိုနှိမျ့၍ပွောကာ သူ့မကျြနှာကိုမှ လှညျ့၍မကွညျ့တော့ပဲ ကွညျကွညျမွငျ့မှာ လှယျအိတျကလေး တရမျးရမျးဖွငျ့ ထှကျခှာသှားလေ ပွီဖွဈသညျ။ “သူမြားသမီးရညျးစားတှဆေို သိပျပြျောဖို့ကောငျးတာပဲဟာ” ဆိုသော မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏စကားလေးသညျ မွဦး၏နား ထဲတှငျ ပဲ့တငျတှထေပျ၍ ကွားယောငျနလေသေညျ။ ရိုးအလှသော မွဦးကတော့ သူမြားသမီးရညျးစား တှသေညျ သူနှငျ့ မွငျ့မွငျ့ ကွညျတို့ ကဲ့သို့ပငျ ရှိလိမျ့မညျဟု သူက တှေးထငျထားခဲ့သညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ စကားကို မကွားဖူးစဉျကတော့ သူ၏စိတျထဲတှငျ အမြားတကာ အတှဲတှလေို ဘာမှဆနျးပွားစှာ ရှိလိမျ့မညျဟု မထငျခဲ့။ ခုတော့ သူမသိသော အခကျြကို မွငျ့မွငျ့ကွညျက ထောကျ၍ပွသှားခဲ့လပွေီ။
“ဘာတှမြေားထူးခွားလို့ပါလိမျ့” ဟူသော ဆနျးစဈမှုအတှေးက မွဦး၏ခေါငျးထဲသို့ ဝငျ၍လာခဲ့ရသညျ။ ဒါဆိုရငျ သူမြား သမီးရညျးစားတှသေညျ သူတို့သမီးရညျးစားထကျ ဘာတှထေူးခွားနသေညျဆိုသညျကို မွဦးတဈယောကျ သိရှိရနျလိုလာပသေညျ။ သိခငျြလာတာနှငျ့အမြှ သိအောငျလုပျရပတေော့မညျ။ ထိုသို့အတှေးရှုပျယှကျခတျကာနစေဉျမှာပငျ မွဦး၏ခေါငျးထဲသို့ အလငျးရောငျတဈခကျြ ထှကျပျေါ၍လာရသညျ။ ဒါကတော့ သူတို့နှငျ့အနီးစပျဆုံး သမီးရညျးစားစုံတှဲဖွဈသညျ့ ကိုဘသိနျးနှငျ့ မခငျ တိုးတို့စုံတှဲပငျဖွဈသညျ။ ထိုသို့ မွဦးသညျ ကိုဘသိနျးနှငျ့မခငျတိုးတို့ စုံတှဲကို သှား၍သတိရလိုကျမိစဉျမှာပငျ နလေ့ညျက သူနှငျ့ သံခြောငျးတို့ အတူလြှောကျလာစဉျ ကိုဘသိနျးကွီးက သံခြောငျးကို မခငျတိုးထံသို့ စခေိုငျးသံကွားလိုကျရသညျ။ ဒီည ကိုဘသိနျး ကွီးက မခငျတိုးဆီသှားမယျတဲ့ … သံခြောငျးက မွဦးကို အာခြောငျပွီးပွနျပွောတာကတော့ မခငျတိုးကွီးအိမျက လူကွီးတှအေလဈ မှာ ခွံထဲကို ည၉ နာရီလောကျ ဆငျးခဲ့ရနျ ကိုဘသိနျးက မခငျတိုးကို ပွောခိုငျးသညျဟု မွဦးသိထားရသညျ။
ဒါဆိုရငျ ကွာပါတယျ၊ ဒီ ညပဲ သူတို့အတှဲတှေ ဘယျလိုဆိုတာကို မွဦးစုံစမျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျသညျ။ မခငျတိုးတို့အိမျဆိုသညျမှာလညျး တခွားဝေးဝေးလညျး မဟုတျ။ မွဦးတို့အိမျ၏ နောကျဖကျတှငျကပျလြှကျဖွဈသညျ။ ခွံစညျးရိုးကလညျး ခိုငျခိုငျမာမာ ရှိသညျမဟုတျတော့ မွဦးတဈ ယောကျ ၉နာရီထိုးသညျနှငျ့ မခငျတိုးတို့ခွံဖကျကို မှောငျရိပျခို၍ အသာလေးဝငျလာခဲ့သညျ။ မခငျတိုးတို့တအိမျလုံးမှာ မီးရောငျ ဆို၍ ဘာမြှမမွငျရ။ လူကွီးတှပေဲ မရှိလို့လား၊ ဒါမှမဟုတျ အိပျပဲ အိပျကုနျကွလို့လားတော့မသိ၊ တအိမျလုံး တိတျဆိတျ၍ နသေညျ။ လဆနျး၁၂ရကျ၏ ည၉နာရီထိုး လရောငျက သဈရှကျတှကွေားမှာ ဝိုးတဝါးထိုးကြ၍နသေညျ။ တှပေ့ါပွီ၊ ခွံထဲရှိ ပိတောကျပငျပတျလညျတှငျ ဝိုငျး၍ရိုကျထားသော ဗွကျ ၂ပခှေဲလောကျရှိသော ခုံပျေါတှငျ ကိုဘသိနျးတဈယောကျ ခွတှေဲလောငျးခြ ကာ ထိုငျ၍နသေညျ။
မွဦးတဈယောကျ ကိုဘသိနျးကိုလှမျး၍ တှမွေ့ငျလိုကျရသညျ့ တခဏမှာပငျ မွဦး၏ဘေးဖကျ ခပျလှမျးလှမျးမှ တစုံတဈဦး လြှောကျ၍လာသညျကို မွဦးတဈယောကျ ကိုဘသိနျးကိုလှမျး၍ တှမွေ့ငျလိုကျရသညျ့ တခဏမှာပငျ မွဦး၏ဘေးဖကျ ခပျ လှမျးလှမျးမှ တစုံတဈဦး လြှောကျ၍လာသညျကို သတိထားမိလိုကျဖွငျ့ အနီးတှငျရှိသော စံပယျရုံဘေးရှိ မှောငျရိပျထဲသို့ ပွေး၍ကပျကာ ပုနလေိုကျရသညျ။ လှမျး၍ကွညျ့လိုကျတော့ လြှောကျလာသူမှာ မခငျတိုးပငျဖွဈသညျ။ မခငျတိုးသညျ ခပျသှကျသှကျလေး လြှောကျ၍လာရငျးက ကိုဘသိနျးရှိရာပိတောကျပငျကွီးဆီသို့ ဦးတညျ၍သှားတော့ရာ မွဦးကလဲ ခါးလေးကို ကုနျး ဇကျလေးကိုပုပွီး မှောငျရိပျကို အကာအကှယျယူကာ ပိတောကျပငျကွီးဘေးရှိ ဇီဇဝါပနျးခွုံ ကွား ဘေးမှောငျရိပျထဲသို့ တိုး၍ဝငျလိုကျသညျ။ မွဦးရောကျရှိသှားသော နရောမှာ ကိုဘသိနျးထိုငျနရောနှငျ့ဆိုလြှငျေ ၅ပခေနျ့သာ ဝေးပမေညျ။ ထို့ပွငျ သူ ရောကျရှိနသေော နရောမှာ ပိတောကျပငျးကွီး၏ အရိပျကလညျး ထပျဆငျ့ ထိုးကြ၍နပွေီး ဇီဇဝါပနျးရုံ၏ အရိပျကလညျး ရှိနလေေ ရာ အတျောလေးပငျ မှောငျမညျး၍ နလေသေညျ။
မွဦးတဈယောကျ ဇီဇဝါပနျးရုံကွီး ဘေးရောကျလာစဉျမှာပငျ မခငျတိုးကလဲ ကိုဘသိနျးကွီး၏ ရှသေို့ ရောကျ၍လာခဲ့ခပြွေီ။ “စောငျ့နတေော ကွာပွီလား ကိုသိနျး” “အငျး အတိုးကလဲ ကွာလိုကျတာကှာ၊ လာမှ လာပါ့မလားလို့။” “လူကွီးတှအေိပျအောငျ စောငျ့ရသေးတယျ အကိုသိနျးရဲ့” မခငျတိုးက ပွောပွောဆိုဆိုပငျ ကိုဘသိနျး၏ဘေးသို့ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျလြှငျ ကိုဘသိနျးကွီးက ဘာမပွောညာမပွောနှငျ့ မခငျတိုးကို ဖကျ၍ ပါးလေးနှဈဘကျကို ဘယျပွနျညာပွနျ မှေးကာကွူ၍ နလေတေော့သညျ။ မခငျတိုး တော့ ဘယျလိုနသေညျမသိ။ မွဦးတဈယောကျတော့ အသကျရှူနတောပငျ ရပျသှားမတတျ ဖွဈ၍သှားရသညျ။ အလဲ့ … မခငျတိုး ကလဲ အာဂပငျ၊ သူမ၏လကျတဈဖကျက ကိုဘသိနျးကွီး၏ ခါးကိုပငျ ပွနျ၍ဖကျထားလိုကျသေးသညျ။
ကိုဘသိနျးကွီးက မခငျတိုး၏ မကျြနှာလေးကို မှေးကွူရရုံဖွငျ့ အားရပုံမပျေါသေး၊ သူ၏ နှုတျခမျးထူထူကွီးဖွငျ့ မခငျ တိုး၏နှုတျခမျးပါးလေး တှပေျေါသို့ ဖိကပျ၍ စုပျနမျးနတေော့ရာ ကနျြနသေော မခငျတိုး၏ လကျလေးတဈဖကျကပါ ကိုဘသိနျး၏ ကြောပွငျကွီးကို ဖကျ၍၍ထားပွီး သူတို့နှဈယောကျ တဈယောကျကိုတဈယောကျ အတငျးပငျ တိုး၍ ဖကျလိုကျကွသညျကို မွဦးက သဲကှဲစှာ မွငျလိုကျရသညျ။ မခငျတိုး၏ မကျြလုံးတှကေလဲ မှိတျ၍သှားသညျကို တှမွေ့ငျလိုကျသော မွဦးတဈယောကျ ဘယျလို ဖွဈလာသညျမသိ၊ တကိုယျလုံး ထူပူ၍လာရာက နတျကသြလို တုနျတုနျယငျယငျ ဖွဈ၍လာရတော့သညျ။
ဒီအခြိနျမှာပငျ မွဦးသတိထားမိလိုကျတာက သမီးရညျးစားနှဈယောကျ တှရေ့ငျ စကားတှေ ဖောငျလောကျအောငျပွောသညျ ဟု သူ သိထားသညျမှာ မှားယှငျး၍ နပေါပွီကော။ ကိုဘသိနျးနှငျ့ မခငျတိုးတို့ စကားတှဘောမြှ မပွောလိုကျ၊ တဈခှနျးနှဈခှနျးသာ ပွော လိုကျသညျကို သူကွားလိုကျရသညျဟု တှေးတောလိုကျမိသညျ။ မွဦးကွညျ့နစေဉျမှာပငျ ကိုဘသိနျးက မခငျတိုး၏ နှုတျခမျးတှေ ကို မလှတျတမျး ငုံခဲထားရငျးကပငျ သူ၏လကျကွီးတဖကျက မခငျတိုး၏ နို့အုံတှကေို အကငြ်္ီပျေါမှပငျ ဆုတျနယျခွမှေ၍ နသေညျ ကို တှလေို့ကျရသညျ။ သိပျမကွာလိုကျသော အခြိနျတှငျပငျ ကိုဘသိနျးကွီးက မခငျတိုး၏ ကိုယျလုံးလေးကို ခါးမှပှကေ့ာ ခံတနျးပျေါ သို့ ပကျလကျလှနျ၍ ခလြိုကျလသေညျ။
မခငျတိုးတဈယောကျ ပကျလကျလေးဖွဈသှားစဉျမှာပငျ သူမ၏ကိုယျလုံးပျေါမှ ပါ၍သှား သော ကိုဘသိနျးကွီးသညျ လကျဖကျက မခငျတိုး၏ အကငြ်္ီကွယျသီးတှကေို ဖွုတျလိုကျရာက အကငြ်္ီရငျဘတျ နှဈခွမျးကို ဘယျညာဟ၍ ဖှငျ့လိုကျသောအခါ ကိုဘသိနျးတော့ ဘယျလိုနသေညျမသိ၊ မွဦးတဈယောကျတော့ ရငျထဲတှငျ ဒိနျးကနဲဖွဈသှားပွီး သူ၏မကျြလုံးတှကေိုပငျ မကျြတောငျခတျရနျ မသှေ့ားရလသေညျ။ ဘျောလီအကငြ်္ီအတှငျးမှ ပွညျ့အံကာထှကျနသော မခငျတိုး၏ နို့အုံသားတှသေညျ အိဖောငျး၍ လရောငျအောကျမှာ ဖှေးနှဈ၍နလေသေညျ။ မကျမောစရာကောငျးလှလှနျး၍ ကိုဘသိနျးသညျ ခေါငျးကွီးကိုငုံ့ပွီး တရှုံ့ရှုံ့ နမျးနတေော့သညျ။ ကိုဘသိနျး၏ လကျကလညျး အငွိမျမနပေဲ မခငျတိုး၏ ဘျောလီအကငြ်္ီအနောကျက ခြိတျတှကေိုပါ ဖွုတျနလေသေညျ။ ခြိတျမြားအကုနျ ပွုတျသှားပွီး ဘျောလီအကငြ်္ီကို လှနျတငျလိုကျကာ နို့အုံနှဈဘကျလုံးကို လကျ ဖွငျ့ဆုတျ၍ နယျပဈလိုကျတော့သညျ။
နို့ကွီးနှဈလုံးမှာ လရောငျဖှေးဖှေးတှငျ ဖွူဝငျး၍နသေညျ။ ကိုဘသိနျးက စိတျတှအေလှနျပငျ ထကွှလာပုံဖွငျ့ မခငျတိုး၏နို့တှကေို အတငျးငုံ့၍ စို့လတေော့သညျ။ မွဦးတဈယောကျတော့ မတျတတျပငျ မရပျနိုငျတော့၊ ဒူးတှတေဆတျဆတျ တုနျလာပပွေီ။ ပွီး တော့ တခါမှမဖွဈပျေါခဲ့ဖူးသော ခံစားမှုတှကေလဲ သူ့တဈကိုယျလုံး ရှိနျးရှိနျးဖိနျးဖိနျး ဖွဈပျေါနလေကျြ ပုဆိုးတှငျးမှ ဖှားဘကျတျော ကွီးကလဲ တောငျမတျပွီး တဆတျဆတျဖွဈနလေသေညျ။ ကိုဘသိနျးကတော့ တရှူးရှူးတရှဲရှဲဖွဈ၍ လာရာက မခငျတိုး၏ ထဘီ ကိုပငျ လှနျ၍တငျလိုကျရာက သူမ၏ပေါငျနှဈလုံးကွားတှငျဝငျ၍ ဒူးထောကျကာ ထိုငျလိုကျလတေော့သညျ။ မခငျတိုး၏ ပေါငျတံ ကွီးတှမှောလညျး လရောငျအောကျတှငျ ဖွူဖှေး၍နပွေီး တလုံးတခဲကွီးဖွဈကာ တပျမကျစရာကွီးပငျ။ သူတခါမှ မမွငျဘူးလေ သော အရှယျရောကျပွီးမိနျးတဈယောကျ၏ မမွငျအပျလသေော ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှကေို မွဦးသညျ တဈခုခငျြး ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျနရေလပွေီ။ ဒါ့အပွငျ ယခုသူ့ရှေ့ မွငျကှငျးကလဲ သူကွားဖူးနားဝသာ ရှိခဲ့ဖူးပွီး မမွငျဖူးခဲ့လသေော မွငျကှငျးပငျတညျး။
သူမ၏ ပေါငျဖွူဖွူကွီးနှဈလုံးကွားတှငျ ကိုဘသိနျးက ဝငျ၍ထိုငျလိုကျရာက ဒူးထောကျ၍ သူ၏ပုဆိုးကို ခြှတျခလြိုကျတော့သညျ နှငျ့ မခငျတိုးသညျလညျး သူမ၏ ပေါငျနှဈလုံးကို ဆှဲ၍ ထောငျလိုကျ လတေော့သညျ။ ဒီအခြိနျမှာပငျ ကိုဘသိနျးက သူ၏လီးတနျကွီး ကို ကိုငျ၍ လီးတနျကွီးထိပျနှငျ့ မခငျတိုး၏ စောကျပတျနှုတျခမျးသားနှဈခုလုံးကို ထိကာ အကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ အထကျအောကျ စုနျဆနျကာ ပှတျသပျ ပေးနလေသေညျ။ “အ … အကိုသိနျး … ဟငျ့ … တျောတျောကွာ လူကွီးတှေ နိုးလာရငျ ခကျ မယျ … ဟငျ့ …” မခငျတိုး၏ စောကျပတျဝတှငျလညျး စောကျရညျမြားမှာ စိမျ့၍ ထှကျနခေပြွေီ။ မခငျတိုးမှာ ဒိထကျပိုပွီး စိတျမ ရှညျနိုငျတော့ပေ။ အနရေ အထိုငျရ တျောတျောခကျနပေုံရသညျ။ မခငျတိုး တဈယောကျတညျးပငျ နရေထိုငျရခကျလှသညျမဟုတျ၊ မွဦးသညျလညျး ဒူးတှေ တဆတျဆတျ တုနျလာသဖွငျ့ မတျတပျပငျ မရပျနိုငျတော့ပဲ ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျလိုကျရသညျ။ ဟော ခု တဈခါ ထိုငျ၍ ကွညျ့ရသညျမှာလညျး အားမရသဖွငျ့ မွဦးတဈယောကျ မတျတပျထရပျကာ ကွညျ့နပွေနျလပွေီ။ မခငျတိုး၏ အခွအေနကေို ရိပျစားမိလသေော ကိုဘသိနျးကလညျး လကျတဈဖကျက သူမ၏ စောကျပတျနှုတျခမျးသား နှဈခုပျေါတှငျ လကျညှိုး လကျမတို့ဖွငျ့ အသာလေး ဖိကာဖွဲလိုကျပွီး သူ၏လီးတနျကွီးကို တကေ့ာဖိ၍ လိုးသှငျးလိုကျလတေော့သညျ။
“အ … အမလေး … ဟငျး … အရမျး … အရမျးကွီးဘဲ .. အကိုသိနျးကလဲ … ဒီမှာ နာသှားတာပဲ .. ဟှနျး” မခငျတိုးက သူမ၏နှုတျခမျးလေးတှကေို ခြှတျကာ မူမူစူစူလေး ပွောလိုကျသညျ။ “တျောတျောနာသှားလားဟငျ … အကို လောကွီးသှားလို့ပါ” “နာတာပေါ့ .. ဖွေးဖွေးလုပျလဲ ရတာပဲဟာ” “ခုရော .. ဆကျပွီးနာနသေေးလား” “ကဲပါ .. မနာတော့ပါဘူး။ လုပျမှာဖွငျ့ လုပျ တော့။ လူကွီးတှေ နိုးကုနျရငျ ခကျမယျ” သူမ၏ စောကျပတျထဲတှငျ ကိုဘသိနျး၏ လီးတနျကွီးမှာ တဆုံးဝငျလကျြ တဈလဈကွီး ဖွဈနသေညျကို အားမလိုအားမရ ဖွဈလြှကျ လီးတနျကွီးကလဲ မလှုပျမရှားပဲ ငွိမျနသေောအခါ အဆမတနျ ရမ်မကျစိတျတှေ ပွငျးပွ လာရသော မခငျတိုးက ကိုဘသိနျး မွနျမွနျလိုးစရေနျ လူကွီးတှကေို အကွောငျးပွလကျြ လောဆျောလိုကျလသေညျ။ ဒါကိုပငျ မွဦး က မယောငျမလညျဖွငျ့ အိမျကွီးဆီဘကျကို လှမျး၍ ကွညျ့လိုကျသေးသညျ။
ကိုဘသိနျးကတော့ သူ၏လီးတနျကွီးကို ညငျသာစှာ ဆှဲ၍ထုတျလိုကျရာက စ၍ လိုးနခေပြွီ။ ၁၀ခကျြမြှ ခတျဖွေးဖွေး လုပျ ပွီးသညျနှငျ့ အားမရနိုငျဖွဈ၍ လာရသော ကိုဘသိနျးသညျ စိတျထငျတိုငျး ဆောငျ့၍ လိုးတော့သညျ။ မခငျတိုး ခမြာမှာတော့ မကျြလုံးနှဈလုံး စုံမှိတျထားရငျး ဟငျ့ကနဲ အငျ့ကနဲပငျ ဖွဈအောငျ အားပါးတရကွီးကို ကော့၍ပေးနတေော့သညျ။ ဒါ့အပွငျ မခငျတိုး က သူမ၏ ဒူးကှေးကာ ထောငျထားသော ခွထေောကျနှဈဘကျကို ကုနျး၍ရုနျး၍ လိုးနသေော ကိုဘသိနျး၏ တငျပါးပွောငျ ပွောငျကွီး ပျေါသို့ ခြိတျကာတငျလိုကျပွီး စောစောကထကျပငျ တိုး၍ ကော့ပေးနပွေနျပါသညျ။ စောကျရညျကွညျတှေ အတျောပငျ ရှဲစိုနပွေီဖွဈသော မခငျတိုး၏ စောကျပတျကွီးကွောငျ့ ‘စှပျ’ ကနဲ ‘ပွှတျ’ ကနဲ ‘ဖှတျ’ ကနဲ အသံတှမှောလညျး တဖွေးဖွေး သိသိ သာသာ ပျေါထှကျလာတော့သညျ။
မွဦးခမြာတော့ ဆကျလကျ၍ကွညျ့ဖို့ရာ မစှမျးတော့ပေ။ သူ၏ တကိုယျလုံးရှိ အားအငျတှမှော လညျး ဘယျကို ရောကျသှားသညျမသိ၊ တကိုယျလုံး ခြိနဲ့နလေပွေီ။ ဒါတငျမကသေး၊ ရငျထဲတှငျလညျး ဟာတာတာ ဆာတာတာဖွငျ့ အသကျရှူရတာလဲ ရငျမောကာ ကွပျနလေသေညျ။ ဒါ့အပွငျ ရငျတှလေညျး တဒိနျးဒိနျးခုနျ၍ နပွေီး ကိုဘသိနျး၏ ဆောငျ့ခကျြ ကွောငျ့ လှုပျခါနသေော မခငျတိုး၏ နို့အုံကွီးတှကေိုပငျ ပွေး၍ ညှဈကိုငျပဈလိုကျ ခငျြလာလသေညျ။ သူ၏အာရုံထဲမှာတော့ မွငျ့ မွငျ့ကွညျ ကလေးကိုသာ ပွေးမွငျယောငျမိနတေော့သညျ။မွဦးသညျ ရပျ၍ကွညျ့နရောမှ အသာလှညျ့ပွီး မှောငျရိပျခိုကာ လာလမျးအတိုငျး ပွနျလာခဲ့လသေညျ။
အပွနျခရီးမှာတော့ မွငျ့မွငျ့ကွညျပွောသညျ့ “သူမြား သမီးရညျးစားတှဆေို သိပျပြျောဖို့ ကောငျးတာပဲ” ဆိုတာ ဒါကိုပဲပွောတာလားမသိ .. အို .. ဒါပဲရှိတာပဲ၊ ဒါကိုပဲပွောတာ သခြောပါတယျ၊ ကိုဘသိနျးတို့ လုပျကွသလိုမြိုး မွငျ့မွငျ့ကွညျကို လုပျပဈလိုကျတော့မယျ။ သူပွောတာ ဒါပဲဖွဈမှာပါ၊ သခြောပါတယျ … အငျး ဒီညကတော့ အခြိနျမရှိတော့ဘူး။ မနကျဖွနျက ကြောငျးပိတျရကျပဲ၊ ဒါပမေယျ့ မွငျ့မွငျ့ကွညျအိမျက လူကွီးတှေ ဈေးဆိုငျထှကျကွမှာဆိုတော့ အိမျမှာ မွငျ့မွငျ့ကွညျပဲ ရှိမယျ။ ငါမနကျဖွနျ သှားဖွဈအောငျ သှားရမယျ ဟု တဈကိုယျတညျးပွောကာ နလေသေညျ။
အမှနျတော့ ကိုဘသိနျးနှငျ့ မခငျတိုးတို့သညျ ကိုဘသိနျးက အသကျ ၂၄ နှဈ၊ မခငျတိုးက အသကျ ၂၂ နှဈရှိကွပွီး သမီးရညျးစား ဖွဈ ကွသညျမှာလညျး ၆ နှဈမြှ ရှိခဲ့ပွီးဖွဈရာ ခုလို လငျမယားမကြ ဖွဈနခေဲ့သညျမှာ တဈနှဈလောကျပငျ ရှိနပွေီဆိုသညျကိုတော့ မွဦး တဈယောကျ မသိရှာပါပေ။ မွဦးနှငျ့ မွငျ့မွငျ့ကွညျတို့ ၂ယောကျမှာတော့ မွဦးက ၁၈ နှဈကြျောကြျော၊ မွငျ့မွငျ့ကွညျက ၁၈ နှဈပွညျ့ ခါနီးမြှသာ ရှိနသေေးသညျကို ပွနျလညျ မဆနျးစဈမိခဲ့ခြေ။ ဒါ့အပွငျ သူတို့နှဈဦးသညျ ကာမကိစ်စကို ယခု လကျတညျ့စမျးရနျ ကွံရှယျရုံသာ ရှိကွသေးပွီး ပွောရမညျဆိုလြှငျ မွဦးသညျ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ ပါးဖွူဖွူမို့မို့လေးမြားကိုပငျ တခါမှ မမှေးကွူခဲ့ဖူးပေ။ ခုတော့ဖွငျ့ အတုမွငျ အတတျသငျဆိုတာမြိုးလို မွဦးတဈယောကျ တညျငွိမျနသေော သူ၏ရငျတှငျ ဂယကျလှိုငျးမြားသညျ ကွောကျခမနျးလိလိ ရိုကျခတျနရေပွီ ဖွဈပါတော့သညျ။
ထို့နောကျ လမျးထိပျကိုထှကျကာ သံခြောငျးကိုရှာ၍ မွငျ့မွငျ့ကွညျထံ စာသဝဏျ ပါးလိုကျသညျ။ ပွီးတော့မှ စိတျခလြကျခဖြွငျ့ အ မပေေးလိုကျသော မုနျ့ဖိုးဖွငျ့ ဘာဘူကွီးဆိုငျတှငျ လကျဘကျရညျဝငျသောကျ နလေသေညျ။ နလေ့ညျ၁၂နာရီမထိုးမီမှာပငျ မွဦး သညျ မွငျ့မွငျ့ကွညျတို့ အိမျရှိရာသို့ ထှကျ၍ လာခဲ့သညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျတို့အိမျမှာ တိုကျခံနှဈထပျအိမျ ဖွဈသညျ။ သူရောကျသှား တော့ အိမျရှတေံ့ခါးမှာ အဆငျ့သငျ့ဖှငျ့ထားသဖွငျ့ ခါတိုငျးလိုပငျ မွဦးသညျ အိမျထဲသို့ဝငျလာခဲ့သညျ။ အိမျအောကျထပျတဈခုလုံး တိတျဆိတျ၍နသေညျ။ အိမျရှတှေ့ငျ ဘယျသူမှမရှိသဖွငျ့ မွဦးသညျ အောကျထပျတှငျပငျ ရှိနသေော မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ အိပျခနျးရှိရာ သို့ လြှောကျလာခဲ့သညျ။
မွဦးတဈယောကျ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ အိပျခနျးရှသေို့ ရောကျပါပွီ။ တံခါးပိတျထားသဖွငျ့ လကျဖွငျ့အသာတှနျးကွညျ့ရာ တံခါးရှကျ၂ခပျြသညျ စထေ့ားသဖွငျ့ အလိုကျသငျ့ပငျ ခပျဟဟလေး ပှငျ့၍ သှားလသေညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျကို မှနျတငျခုံရှတှေ့ငျ ထိုငျ၍ အလှပွငျနသေညျကို တှလေို့ကျရသညျ။ ရခြေိုးပွီးခါစတော့ ဟုတျမညျမထငျ။ တံခါးဝကို ခပျစောငျးစောငျးလေး နောကျကြောပေး၍ ထိုငျနသေော မွငျ့မွငျ့ကွညျထံသို့ မွဦး၏ အကွညျ့တှကေ ရောကျသှားပွီး တခဏလေးမှာပငျ မို့မို့လေး ဖောငျး၍နသေော သူမ၏ ရငျအုံလေးနှငျ့ ကား၍ အိဖောငျးကာ ပွညျ့တငျးနသေော သူမ၏ တငျသားတှဆေီသို့ မွဦး၏ အကွညျ့ တှကေ ရောကျရှိသှားခဲ့ရလပွေီ။
မွငျ့မွငျ့ကွညျသညျ မခငျတိုးလောကျတော့ ကိုယျလုံးကိုယျထညျ မဖှံ့ဖွိုးသေးသျောလညျး သူ့ဟာနှငျ့သူတော့ အတျောလေးလှ၍ နသေညျဟု မွဦးက မှတျခကျြခလြိုကျမိရငျး မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ အိပျခနျးထဲသို့ လှမျး၍ ဝငျလိုကျရာ မွငျ့မွငျ့ကွညျကလဲ သူ့ဆီသို့ လှညျ့ အကွညျ့ဖွငျ့ ဆုံကွလသေညျ။ “လာ … ကိုဦး … ထိုငျလေ” “အငျး” အခနျးထဲတှငျ ထိုငျစရာနရောရှာလိုကျတော့ မွငျ့မွငျ့ကွညျ အိပျသညျ့ ကုတငျလေးတဈလုံးသာ ရှိလသေညျ။ မွဦးကလဲ အရငျမွဦးမဟုတျတော့သဖွငျ့ ခပျတညျတညျပငျ ဝငျ၍ ထိုငျလိုကျ သညျ။ ကုတငျလေးပျေါသို့ မွဦးတဈယောကျ ထိုငျခလြိုကျသညျနှငျ့တပွိုငျတညျး မွငျ့မွငျ့ကွညျကလဲ မှနျရှမှေ့ထလာကာ မေး လိုကျသညျ။ “ကိုဦးက ကွညျ့ကို ၂ယောကျတညျးတှခေ့ငျြတယျဆို?” “အငျးလေ” “ဘာဖွဈလို့လဲ?” “တို့ သမီးရညျးစားတှပေဲ ဟာ … ၂ယောကျတညျးဆိုတော့ လှတျလှတျလပျလပျ ရှိတာပေါ့” မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏မကျြနှာလေးမှာ ပွုံးစစလေး ဖွဈ၍သှားရာက ပငျ မွဦး၏ဘေးသို့ ထိုငျ၍ခလြိုကျသညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျထံမှ မှေးပြံ့သော သငျးရနံ့တို့သညျ မွဦးဆီသို့ တညျ့တညျ့မတျမတျပငျ ဝငျ ရောကျ၍ လာရာက မွဦး၏ ရငျကို ထိုးဆှ၍နခေပြွေီ။ မွဦးသညျ မွငျ့မွငျ့ကွညျရှိရာဖကျသို့ ငဲ့စောငျးကာ ကွညျ့လိုကျမိသညျ။
ဒီနမှေ့ပငျ မွငျ့မွငျ့ကွညျတဈယောကျ ခါတိုငျးကြောငျးသှားစဉျထကျပငျ ပို၍လှနသေေးသညျ။ သသေခြောခြာကို ဂရုတစိုကျဖွငျ့ အလှပွငျထားပုံ ရလသေညျ။ ပွီးတော့ သူမ၏မကျြနှာလေးက ငုံ့လြှကျ ကုတငျဘေးကွမျးပွငျကို စူးစိုကျကာ ကွညျ့နလေသေညျ။
သူတို့နှဈဦးသားမှာ တဈယောကျကိုတဈယောကျ စကားမဆိုမိကွပဲ ငွိမျသကျ၍ နကွေလသေညျ။ တခကျြတခကျြတှငျ အခနျးပွူ တငျးပေါကျမှ ဝငျ၍လာသော လပွေလေေးမြားကသာ မွဦးနှငျ့ မွငျ့မွငျ့ကွညျတို့ကို တိုးဝှဖွေ့တျသနျး သှားကွသညျ။ မွငျ့မွငျ့ ကွညျနှငျ့ ယှဉျတှဲထိုငျနရောက စိတျတှလှေုပျရှားလာသော မွဦး၏ လကျတဈဖကျက သူမ၏ ပုံခုံးထကျဆီသို့ ကရြောကျ၍သှားရာ က မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ နုထှေးသော ပုခုံးလုံးလုံးလေးကို သူ၏လကျဖဝါးဖွငျ့ ဆုပျကိုငျလိုကျရငျး “ကွညျ ကိုဦးကို ခဈြလား … ဟငျ” မွဦး၏ စကားသံကပုံမှနျထကျပငျ တုနျခါ၍နရေသလို မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ မို့မောကျမောကျလေး ဖွဈနသေော ရှရေငျနှဈမှာသညျ လညျး နိမျ့ခညျြမွငျ့ခညျြလေး ဖွဈ၍လာလသေညျ။ မွဦး၏ တုနျလှုပျလှိုကျဖိုသော အမေးစကားကို ကွားရသောအခါ ရငျထဲတှငျ နှေး၍သှားရကာ မွဦးကိုလညျး အံ့သွ၍သှားရသညျ။
“အငျး …” ဟု မွငျ့မွငျ့ကွညျက တိုးတိုးလေး ဖွလေိုကျရငျးက ရီဝသေော မကျြလုံးအစုံဖွငျ့ မွဦးကို လှညျ့၍ ကွညျ့လိုကျသညျ့ ခဏ မှာပငျ မွဦးနှငျ့ မွငျ့မွငျ့ကွညျတို့ မကျြနှာနှဈခုမှာ ထိလုမတတျ ကပျ၍သှားခဲ့ရပွီး မကျြလုံးခငျြးလဲ ဆုံမိကွလသေညျ။ ကနျြ နသေော မွဦး၏လကျတဈဖကျက သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးပျေါသို့ ထပျမံကရြောကျလာပွီးလြှငျ ခဏခငျြးမှာပငျ မွဦးသညျ မွငျ့မွငျ့ ကွညျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ဆှဲယူပှဖေ့ကျလိုကျပွီး ပါးဖောငျးဖောငျး ဖွူဖွူမို့မို့လေးမြားအား မှေးကွူလိုကျတော့သညျ။ ခဈြစရာ့ အသှငျ မကျြနှာလေးကို မော့၍ပေးလိုကျရငျးကပငျ ရငျထဲမှ ပွငျးပွလာသော ပီတိအဟုနျတို့ကွောငျ့ မွငျ့မွငျ့ကွညျသညျ မွ ဦး၏ကိုယျလုံးကွီးကို ပွနျ၍ ဖကျတှယျလိုကျမိသညျ။ ဒီလိုအခြိနျမြိုး ဒီလိုအပွုအမူမြိုးကို စိတျကူးယဉျကာ မြှျောလငျ့ခဲ့ရလသေော မွငျ့မွငျ့ကွညျတဈယောကျ သူမ၏ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ ပွညျ့စုံခဲ့ရပပွေီ။ သူမသညျ မွဦးကိုလညျး နားမလညျနိုငျစှာဖွဈလကျြ အံ့သွ ကွနေပျ၍လညျး နမေိသညျ။ မွဦး နမျးသညျကို အားရကွနေပျစှာ အနမျးခံနသေော မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ မကျြနှာလေးသညျပငျ ပွုံး ယောငျလေးသနျး၍ နလေသေညျ။
မွဦးက မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ ပါးပွငျနှဈဘကျကိုသာမက နဖူးဆံစပျလေးမြားနှငျ့ မေးဖြားလေးကိုပငျ မှေးကွူကာ နမျးနပေါသေးသညျ။ ပွီးတော့မှ မွဦးက သူ၏မကျြနှာကို အသာခှာကာ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ မကျြနှာလေးကို စိမျးစိမျးလေး တဈခကျြ ကွညျ့လိုကျပွီးတော့မှ သူ၏ နှုတျခမျးတှကေ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ နှုတျခမျးလုံးလုံးလေးတှပေျေါသို့ ဖိကပျကာ စုပျနမျးလိုကျပါတော့သညျ။ နှဈဦးလုံး၏ အစိမျးသကျသကျသာ ရှိလသေော သှေးသားတို့သညျ ဟုနျးကနဲ နိုးကွှကာ ထ၍လာခဲ့ရခပြွီ။ ဒီလိုနမျးနရေငျးမှပငျ မွဦးသညျ မွငျ့ မွငျ့ကွညျ၏ ကိုယျလုံးလေးကို တဖွေးဖွေး အိပျယာပျေါသို့ လှဲခရြငျး တငျးကွပျစှာ ပှဖေ့ကျထားမိသလို မွငျ့မွငျ့ကွညျကလဲ မွ ဦး၏ ကိုယျလုံးကွီးကို အတငျးပငျ သိမျးကွုံး၍ ပှဖေ့ကျထားလိုကျမိပါသညျ။ အတုမွငျ အတတျသငျ ဆိုသလိုပငျ မွဦးသညျ သူဖိ ထားလသေညျ့အတိုငျး လကျတှကေလဲ အငွိမျမနပေဲ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ တကိုယျလုံးကို ပှတျသပျနရေုံမြှမက တငျသား လုံးလုံး ဖောငျးဖောငျးတှကေိုပါ ဆုတျနယျပေးနပွေနျပါသညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျမှာတော့ ဘယျလိုဖွဈမှနျးပငျ သူမကိုယျသူမ မသိ၊ ဖွငျးကနဲ ရှိနျးကနဲ ဖွဈသလို ခံစားနရောမှ တကိုယျလုံး အားအငျတှေ ဆုတျလြော့၍ လာရသလို နှမျးနယျ၍ လာရပါလတေော့သညျ။
မွဦးသညျ မွငျ့မွငျ့ကွညျဝတျထားသော အကငြ်္ီလေးအပျေါမှပငျ သူမ၏ စူစူမို့မို့ ရှရေငျနှဈမှာကို ဖိကပျကာ နမျးနလေသေညျ။ ပွီး တော့မှ ရငျစအေ့ကငြ်္ီလေးကို ကွယျသီးတှေ တဈလုံးခငျြးဖွုတျကာ တဆကျတညျးမှာပငျ ဘျောလီအကငြ်္ီလေးကိုပါ ကွယျသီး တှေ ဆကျ၍ ဖွုတျပေးလိုကျတော့သညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျမှာ ပကျလကျလေး လှနျကာ ရီဝသေောမကျြလုံးမြားဖွငျ့ မွဦးကိုကွညျ့ လကျြ မောငျ့မကျြနှာ တဈရှာထငျ ဆိုတာလို မွဦးပွုသမြှ နုရတော့မညျ့အသှငျနှငျ့ ပကျလကျလေး လှဲနလေသေညျ။ သူမ၏ တဈ ကိုယျလုံး ငွိမျသကျ၍နသျောလညျး သူမ၏ အတှငျးစိတျမြားမှာတော့ လှုပျရှား၍ နသေညျဆိုသညျကိုတော့ လကျဖြားနှဈဖကျဆီမှ လကျခြောငျးလေးမြား၏ လကျဆဈလေးမြားကို တဖြောကျဖြောကျ ခြိုးနသေညျကို မွငျရခွငျးဖွငျ့ သိသာနိုငျလသေညျ။
“အို .. အကို…” မွငျ့မွငျ့ကွညျမှာ သူမ၏ မကျြလုံးလေးနှဈဘကျကို စုံမှိတျလိုကျရငျး သူမ၏ မကျြနှာလေးကိုလဲ တဈဖကျသို့ စောငျးငဲ့ကာ လှဲလိုကျလတေော့သညျ။ မှေးညငျးနုလေးမြား စိမျးမွမွဖွငျ့ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ စောကျပတျနှုတျခမျးသား ဖောငျးဖောငျး လေးနှဈခု ပွဲဟသှားလသေော အခါတှငျတော့ နီရဲလြှကျ အထပျထပျ အလှာလှာ ပနျးပှငျ့ပမာဖွဈ၍ နလေသေော စောကျပတျ နှုတျခမျးသားလေးမြားသညျ စိမျ့ထှကျနပွေီဖွဈသော စောကျရညျကွညျလေးမြားကွောငျ့ ပွောငျလကျရှမျးစိုစှာဖွငျ့ ထှကျပျေါလာခဲ့ လသေညျ။ ထိပျဘကျနားဆီမှ စောကျစနေီ့နီရဲရဲလေးကလဲ အသညျးယားစဖှယျ ငေါကျတောကျလေး ထောငျ၍ နတေော့သညျ။
ပွောငျတငျးကာ အရညျကွညျလေးမြား စိမျ့ထှကျ၍နသေော မွဦး၏ လီးတနျထိပျဖူးကွီးသညျ သူမ၏ စောကျပတျဝ အတှငျးသား နု နုလေးမြားကို ပူနှေးစှာဖွငျ့ တှထေိ့လာလတေော့သညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျသညျ အသကျကို ဝအောငျ ရှူလိုကျပွီး နှုတျခမျး၂ဘကျကို တငျးတငျးလေးစကေ့ာ မာနျတငျးလိုကျမိသညျ။ ထိုအခြိနျမှာပငျ ရမ်မကျဇောတှေ ပွငျးပွကာ စိတျတှမေထိနျးနိုငျတော့သော မွဦး သညျ သူ၏ သီးတနျကွီးကို မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ စောကျခေါငျးနုနုလေးထဲသို့ တအားပငျ ဖိ၍ သှငျးလိုကျလသေညျ။
“ဗဈြ .. ဗဈြ .. အား ..အမလေး .. သပေါပွီ … ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ” မွငျ့မွငျ့ကွညျမှာ သူမ၏ ခါးသေးသေးလေးသာ ကော့တကျ သှားသညျမဟုတျ သူမ၏ ကြောပွငျလေးပါ ကော့၍ သှားရလသေညျ။ ပွီးတော့ အသားတှလေညျး တဆတျဆတျတုနျကာ စောစော က စောငျးငဲ့ထားသော မကျြနှာလေးကတော့ မော့၍လာပမေယျ့ ရှုံ့မဲ့နလေသေညျ။ မွဦးသညျ ထိတျထိတျပွာပွာဖွဈသှားပွီး ခွမေ ကိုငျမိ လကျမကိုငျမိဖွငျ့ ဘာလုပျလို့ လုပျရမှနျးမသိအောငျ ဖွဈနလေသေညျ။ ပွိးတော့မှ မွဦးသညျ သတိရသှားပွီး လီးတနျကွီးကို ဆှဲခြှတျတော့မလိုလုပျပွီးမှ စိတျပွောငျးကာ မခြှတျတော့ပဲ လီးတခြောငျးလုံးကို မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ စောကျပတျလေးထဲသို့ တဆုံး သှငျးထားလြှကျ သူ၏ ကိုယျလုံးကွီးကို မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ ကိုယျလုံးလေးပျေါသို့ မှောကျခလြိုကျပွီး သူမ၏ ကိုယျလုံးလေးကို ထှေး နအေောငျ ဖကျကာ နို့လေးနှဈလုံးကို ဘယျပွနျညာပွနျ စို့၍ ပေးနလေတေော့သညျ။
စောကျခေါငျးထဲတှငျ အတျောပငျ နာအောငျ့၍ သှားရသော မွငျ့မွငျ့ကွညျသညျ နဂိုကပငျ ရမ်မကျထနျ တဏှာကွီးသော ဗီဇက ပါလာ၍လားမသိ။ နာလှနျး၍ အျောဟဈက ညီးတှားလိုကျရသျောလညျး သူမ၏ အျောဟဈ ညီးတှားသံအဆုံးတှငျ ထိုကဲ့သို့ စောကျ ခေါငျးထဲ နာကငျြ၍ အောငျ့သှားရသညျကိုပငျ ရငျထဲတှငျ ကနြေပျ၍ သှားရလသေညျ။ အရှကျတရားဆိုသညျကတော့ သူမ၏ ရငျ ထဲတှငျ လုံးလုံးလြားလြား မရှိတော့ပေ။ ကွညျ့ပါဦး၊ နို့စို့နသေော မွဦးထံသို့ သူမ၏ နို့လေးတှကေိုပငျ ကြောလေး ကော့ကာ ကော့ ကာဖွငျ့ ပငျ့ကပျကာ ပေးနသေလို တတျကြှမျးမှု မရှိသေးသဖွငျ့လညျး သူမ၏ ပေါငျနှဈခြာငျးကို ကားသထကျကားကာ စောကျပတျ လေးကို မွဦး၏ လီးတနျကွီးအရငျးသို့ အတငျးပငျ ဖိကပျ၍ ပေးနမေိခသြေညျ။ လကျတဖကျကတော့ မွဦး၏ ကြောပွငျကွိးကို သိမျးကွုံး၍ ဖကျထားပွီး ကနျြလကျတဖကျက မွဦး၏ ဦးခေါငျးမှ ဆံပငျတှကေို သှယျလြှ ပွညျ့ဖောငျး၍ နသေော လကျခြောငျး လေးမြားဖွငျ့ ထိုးဖှ၍ နလေသေညျ။
မွဦးမှာ မွငျ့မွငျ့ကွညျ နာလှနျး၍ အျောသဖွငျ့သာ အရှိနျသတျလိုကျရသညျ၊ သူ၏ စိတျတှကေတော့ အဆမတနျ ရမ်မကျတှထေနျနေ ရလသေညျ။ လိုးခငျြစိတျတှေ မြားလာသော မွဦးက မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ အခွအေနကေို ကွညျ့လိုကျသေးသညျ။ နာသေးလား ဟု မေး ရနျ စိတျကကွံလိုကျသေးပမေယျ့လညျး ပါးစပျက ပွောမထှကျ၊ မွငျရသော အခွအေနကတော့ မွငျ့မွငျ့ကွညျတဈယောကျ နာကငျြ ပုံမရတော့။ ဆှဲထုတျလိုကျပါပွီ၊ မွဦးသညျ သူမ၏ စောကျခေါငျးထဲမှ လီးတနျကွီးကို မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ စောကျခေါငျးထဲမှ ဆှဲထုတျ လိုကျသောအခါ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ ခါးလေးမှာ ကော့၍ သူမ၏ စောကျပတျဝလေးမှာ လီးတနျကွီးနောကျသို့ လိုကျပါလာသယောငျ ပငျ ရှိနတေော့သညျ။ ပွီးတော့မှ စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပဲ သူ၏ လီးတနျကွီးကို ပွနျ၍ သှငျးကာ ဆောငျ့၍ ဆောငျ့၍ လိုးလေ တော့သညျ။
မွဦး၏ ဆောငျ့ခကျြကွောငျ့ အငျ့ကနဲ တခကျြဖွဈသှားရသျောလညျး မာကွောလှနျးသော လီးတနျကွီးကွောငျ့ သူမ၏ စောကျပတျ အတှငျးသား လေးမြားမှာ အီစိမျ့၍ သှားရသလို ရငျထဲတှငျလညျး ကနြေပျသှားလသေညျ။ မွဦးကလဲ ညှာတာရကောငျးမှနျး မသိ တော့ပဲ အတငျးပငျ ဆောငျ့၍ လိုးပတေော့ရာ စောကျပတျအသဈစကျစကျ ပါကငျလေးဖွငျ့ အလိုးခံနသေော မွငျ့မွငျ့ကွညျမှာ နာကငျြမှုကို ပူးတှဲခံစားနရေသျောလညျး ဒီလို ခပျကွမျးကွမျးဆောငျ့တာကိုပငျ သူမ၏စိတျထဲမှာ အားရကနြေပျနလေသေညျ။
မွဦးကတော့ သူ၏ ကိုယျလုံးကွိးကို သူမ၏ ကိုယျပျေါမှကွှကာ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ ကိုယျလုံးလေး ဘေးတဖကျစီတှငျ လကျကို ထောကျ၍ စိတျထငျတိုငျး ဆောငျ့နသေဖွငျ့ မွဦး၏ ဆောငျ့ခကျြမြားမှာ အထူးပငျ ပွငျးထနျလှကာ နှဈဦးစလုံးမှာ တခါမှ မကွုံခဲ့ဖူး လသေော ထူးခွားလှသညျ့ အရသာကို တမတေ့မောကွီး ခံစားနရေလသေညျ။ မွငျ့မွငျ့ကွညျ၏ စိတျထဲရငျထဲတှငျလညျး မွဦးကို ခငျတှယျသညျ့စိတျ ခဈြတဲ့စိတျမြား ပို၍ပို၍ တိုးပှားလာရသလို မွဦးကလဲ မွငျ့မွငျ့ကွညျအပျေါတှငျ ကွငျနာစိတျမြား ခဈြစိတျမြား ပို၍ တိုးလာလတေော့သညျ။
မကွာလိုကျပါခြေ၊ မွဦး၏ လိးတနျကွီးက သူမ၏ စောကျပတျထဲသို့ အတငျးဆောငျ့ကာ လိုးသှငျးပွီး ဖိကပျလိုကျခြိနျမှာပငျ မွငျ့မွငျ့ ကွညျကလဲ သူမ၏ စောကျပတျကို အတငျးပငျ ကော့တငျပေးကာ သူတို့နှဈဦးလုံး၏ ခန်ဓာကိုယျနှဈခုသညျ တလှနျ့လှနျ့လူး၍ တှနျ့ ကာ ပွီးဆုံးခွငျးသို့ ရောကျသှားရပါလတေော့သညျ။
သရက်မြို့ ဟိုက်စကူးကျောင်းကြီးမှာ မြို့၏ အနောက်မြောက်စွန်း တောင်ကုန်းကလေး တစ်ခုပေါ်၌ သပ်ရပ်လှပမှုဖြင့် တင့်တယ် စွာ ရှိနေပါသည်။ မြောက်ဘက်ဘောလုံးကွင်း၊ တပ်ကွင်း၊ လွင်ပြင်များဆီမှ တိုက်ခတ်လာသော လေပြေအေးများမှာလည်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ် သည်နှင့်အမျှ အေးမြလှသည်။ ထိုလေပြေအေးတို့ကို တိုက်ခတ်ခံရင်း ကျောင်းဘေးပတ်လည်၌ ပြေးကာခုန် ကာ ကစားနေကြသော ကလေးသူငယ် အရွယ်ပေါင်းစုံမှာလည်း ရွှင်ရွှင်မြုးလျှက် ပျော်မြူးနေကြသည်။ ကျောင်းဘေး ပတ်လည် တွင် စီတန်းလျှက် စိုက်ပျိုးထားသော ဇလပ်ပန်းများမှာလည်း ရာသီမရွေး အပွင့်အဖူးများဖြင့် ဖြူဖြူဖွေးလျှက် ရှိနေကြသည်။
ကျောင်း၏ မြောက်ဘက်သို့ ထိုးထွက်ဆောက်လုပ်ထားသော ခန်းမဆောင်ကြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဇလပ်ပင်များသည် ပိုပို၍ပင် ပွင့်နေကြသည်။ အပင်တိုင်း၏ အောက်တွင် ဇလပ်ပွင့်များသည် ကြွေကျလျှက် ကောက်သူ ပန်သူများကို ငံ့လင့်လဲလျောင်းကာ ရှိ နေကြသည်။ ထိုခန်းမကြီး၏ အရှေ့ဘက် ကလေးများ အနည်းငယ်ရှင်းရာ အုတ်လှေခါးထစ်ဘေး ဇလပ်ပင်တွင် ၁၂နှစ် ၁၃နှစ် အရွယ် ကလေးမလေး ၅ယောက်ကို မြင်နိုင်ပါသည်။ ၄ယောက်မှာ အပင်များအောက်၌ ကြွေကျနေသော ဇလပ်ပွင့်များကို ကောက်ကာ ကြိုးဖြင့် သီကုံးနေကြသည်။ ထိုအထဲမှ တစ်ယောက်ကတော့ အခြားကလေးများနှင့် မတူ အပင်အောက်၌ ကြွေကျနေ သော အပွင့်လေးများကို သတိပင်မပြု အဖက်မျှမလုပ်ပဲ အပင်မြင့်ထက်မှာ ရှိနေသည့် အပွင့်များသို့သာ အာရုံပြုရင်း ခြေဖျားလေး ကို မမှီ့တမှီထောက်ကာ လှပေ့ချောပေ့ဆိုသည့် ပန်းများကိုသာ ရွေးကာခူးဆွတ်ရင်း သီကုံးနေလေသည်။
အတန်ကြာလျှင် အောက်၌ ပန်းကောက်နေသော သူများထဲမှ တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စ ထလာကြကာ … “ပန်းလေးတွေကသိပ်လှတာပဲကွယ် .. မူတော့အိမ်ကျ မမကိုပေးဖို့ တစ်ကုံးရပြီဆရာ .. “ “အို .. ကိုယ်တော့ဆရာ မေမေ့ကိုပေးမယ်” “အို .. ငါတော့ဆရာ ဘုရားကို တင်မှာ” “အမယ် .. ငါတော့ဆရာ . .ဘယ်သူ့မှမပေးဘူး။ အိမ်နားကဒေါ်ခင်တုတ်ကို ၂ပြားနဲ့ရောင်းမယ်ဆရာ။ ဒါမှမုန့်ဝယ်စားရ မယ်” ၁၂နှစ်၁၃နှစ်အရွယ် ကလေးမများမှာ သူတို့လှဖို့ထက် သူတို့နှင့် ပက်သက်သည့် အကြီးများလှဖို့၊ ဘုရားတင်ဖိုံ့၊ မုန့်ဖိုးရဖို့မျှ သာ တွေးတတ်လျှက်၊ တစ်ဦးစီ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကိုယ်ဖော်ပြနေကြသလောက် မတ်တပ်ရပ်လျှက်မှ ခူးရင်း သီကုံးနေသည့် ကလေးမလေးကတော့ သူတို့အားလုံးကို မျက်လုံးလေးစွေကြည့်ရင်း သူမသီကုံးပြီးထားသော ပန်းကုံးကိုလည်း လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခေါင်းထက်မှာ သီကာဝိုက်ပန်လျှက် …
“ဟေ့ မလှလား … ကြည့်ပန်းတွေကသိပ်လှတယ်ဆရာ၊ အောက်ကျပြီးသားလဲ မဟုတ်ဘူး” ထိုသို့အပြောလိုက်တွင် အားလုံးသော ကလေးမများမှာ သူမဘက်သို့ လှည့်လျှက် ကြည့်လိုက်ကြသည်။ “ဟေ့ . ကြည်ကသိပ်လှတာပဲကွယ် . နော်” မနာလိုဝန်တိုစိတ် အလျှင်းမရှိကြသေးသော အရွယ်များ ဖြစ်သည့်အလျှောက် ဖွံ့ဖွံ့ကားကား ဖြူသွယ်တန်းလျှက် ကလေးမလေးအလှကို ဝေကာဆင့် နေသည့် ပန်းကုံးကိုကြည့်လိုက်၊ ပန်းပန်သူကို ကြည့်လိုက်ဖြင့် အားလုံးသော ကလေးမလေးများမှာ သဘောကျနေကြသည်။ သို့သော်က လေးအရွယ်ဘာဝ အလှတွင်သာ အမြဲမနစ်မြောတတ်၊ ကစားဖို့ကလဲ ရှိပါသေးသည်။ “လာကွယ် .. ဟိုဘက်ကစားရုံ ထဲ သွားကစားရအောင်” ထိုထဲမှ တစ်ယောက်က စလိုက်သည်။ “အေး လာသွားကစားမယ်” ထိုတစ်ယောက်ကို ကျန်သုံး ယောက်က မဖင့်မဆိုင်း ထောက်ခံသလောက် ကြည်ဆိုသော ကလေးမကတော့ ထိုတစ်ယောက်ကို ကျန်သုံးယောက်က မဖင့်မ ဆိုင်း ထောက်ခံသလောက် ကြည်ဆိုသော ကလေးမကတော့
“ဟင့်အင်းကွယ် .. ကြည်တော့မကစားချင်ဘူး၊ အဲဒီမှာ ကောင်ကလေးတွေနဲ့” သူမမှာ အပျိုကလေးလိုဟန်ဖြင့် သည်အပြောတွင် မျက်လုံးကလေးက စွေလိုက်ပါသေးသည်။ “ဒါဖြင့် မူ တို့သွားကစားမယ် ကြည့်ဖာသာနေရစ်” ကစားဖို့ အဖော်စပ်တိုင်း ကောင်ကလေးတွေကို အကြောင်းပြတတ်သော မြင့်မြင့်ကြည် ကို ကျန်ကလေးမလေး ၄ဦးမှာ မြင်ပြင်းကတ်သလိုဖြင့် တစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့လျှက် အနိမ့်ဖက်ဆီရှိ ကစားရုံဖက်သို့ ကလေး များပီပီ အပြေးကလေး လာခဲ့ကြသည်။ ကစားရုံနားရောက်မှ အပြေးရပ်လျှက် … “သူက ကောင်ကလေးတွေနဲ့လေးဘာလေးနဲ့ ကြီးကျယ်လိုက်တာ၊ သူက သူ့ရည်းစားနဲ့မှ စကားပြောချင်နေတာဆရာ” ထိုအထဲမှ ကလေးမတစ်ယောက်က စ၍အပြောလိုက် တွင် …
“ဟုတ်ပါရဲ့၊ သူက ရည်းစားနဲ့ဆရာ .. “ ဟုအားလုံးက ထောက်ခံလိုက်သည်။ သူတို့အရွယ်တွင် ရည်းစားဟူသည့် စကား အဓိပ္ပါယ်ကို ပြည့်စုံစွာ နားမလည်သေးသော်လည်း မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့် ယောက်ျားလေးတစ်ဦး ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းနေမှုကိုတွေ့လျှင် သို့သော် ကလေးပီပီကစားရင်း ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းချင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ အရွယ်နှင့်မမျှ ဟန်ပန်များလျှက် ကလေးမဆန်သော အမူ အယာမျိုးနှင့် ရောနှောနေလျှင် ရည်းစားဟု မှတ်ယူစွပ်စွဲတတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သူတို့အားလုံး ကစားရုံထဲသို့ဝင်စတွင် မြင့်မြင့်ကြည်သည် ထိုင်၍ကျန်ခဲ့ရာဖက်သို့ လှမ်းကြည့်မိသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ ၁၂နှစ်အရွယ် မြင့်မြင့်ကြည်မှာ ယောက်ျားလေးများသာ ကစားရုံထဲသို့ မလိုက်ချင်ဟု ပြောပြီးနေခဲ့လျှက် သူမဘေးမှာတော့ ၁၄နှစ် အရွယ်ကောင်လေး တစ်ယောက်က ထိုင်နေပါသည်။ ထိုကောင်လေး၏ လက်ထဲတွင် ကျောင်းရှေ့ ပန်းခြံတွင်း၌သာ ရှိလျှက် မာလီ အလစ်တွင်သာ ခိုးယူရနိုင်သော နှင်းဆီနီရဲရဲလေး တစ်ပွင့်ကို ကိုင်လျှက် မြင့်မြင့်ကြည်သို့ လှမ်းပေးနေလေသည်။ သည်ပန်းကိုပင် ၁၂နှစ်အရွယ် မြင့်မြင့်ကြည်က မျက်နှာကလေးငုံ့ကာ မျက်လုံးကလေးကိုစွေလျှက် ကြာမူပါပါဖြင့် လှမ်းယူနေတော့သည်။ ဒါ ကတော့ မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် လူမမယ် ကလေးဘဝ အသက်၁၂နှစ် အရွယ်ကပင် ဖြစ်ပါတော့သည်။
ငယ်စဉ်ကပင်စ၍ အလှကြိုက်မှု အကောင်းကြိုက်မှုများဖြင့် နစ်မွန်းလျှက် မိဘအမြှောက်အစားကိုခံကာ ပျက်စီးခဲ့ရသောသူမ၏ ပေါ့လျော့သောစိတ်ဓါတ်တွင် ငယ်စဉ်ကပင် ရည်းစားထားချင်သည့် စိတ်ဓါတ်ဖြင့် ၁၄နှစ်ဝင်ခါစကပင် အတန်းတူကစားဖက် လူလှ လူချော လူခန့်ကလေး မောင်မြနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်လျှက် ရည်းစားဖြစ်ခဲ့လေသည်။ ၁နှစ်၂နှစ်ဆိုသော အချိန်ကာလသည် ကျောင်း တက် ကျောင်းဆင်းရင်းဖြင့်ပင် တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် တစ်လပြီးတစ်လ တစ်နှစ်ပြီး တစ်နှစ် ပြောင်းလဲ၍ လာခဲ့ချေပြီဖြစ်ပြီး ယခု ဆိုလျှင် မောင်မြဦးက ၁၈နှစ်၊ မြင့်မြင့်ကြည်က ၁၇နှစ်ကျော်ခဲ့ပေပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်၍ စာမေးပွဲအောင်လျှင် သူတို့သည် တက္ကသိုလ် ပညာရေးကို တက်လှမ်းကြ ပေတော့မည်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ခန္ဓာကိုယ် ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးကာ အလှတွေတိုးနေခဲ့သော မြင့်မြင့်ကြည်သည် ယခု ၁၇နှစ် ကျော် အရွယ်တွင်တော့ ငွားငွားစွင့်စွင့် အစွမ်းကုန် ပွင့်နေသည့် ပန်းလေးတစ်ပွင့်နှယ် အလှသွေးတွေ ကြွယ်ကာ လှချင်တိုင်း လှ၍ နေပေတော့သည်။ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရွယ်နှင့်မမျှအောင် ဖွံ့ဖြိုးလာသည့်နည်းတူ သူမ၏ အတွင်းစိတ်များနှင့် သွေးသား များသည်လည်း ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေစွာ ဖွံ့ဖြိုး၍လာခဲ့ပေပြီ။ သည်မှာတင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိတတ်သည့်အတိုင်း ဆန္ဒ တည်းဟူသော အလိုရမ္မက်သည် သူမ၏ရင်ထဲတွင် ပေါက်ဖွား တည်ရှိ လာလေတော့သည်။ သူမတင်ပဲလားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပါ။ မြဦးက သူမထက်ပင် အသက်တစ်နှစ်မျှ ကြီးသူဖြစ်၍ သူလည်းပဲ မြင့်မြင့်ကြည်နည်းတူ ရင်ထဲတွင် ဆန္ဒတရားတို့သည် ကိန်းအောင်းဖြစ်တည်လျှက် ရှိနေပေသည်။
“ကြည်ကြည် မနေ့က ညနေက ဘာလို့မလာတာလဲ။ ကိုကိုဦးဖြင့် စောင့်လိုက်ရတာ” “ပျင်းလို့ပါ ကိုကိုဦးရာ၊ တနေ့တနေ့ ဒီစကား တွေချည်း ထိုင်ထိုင်ပြီးပြောနေရတာ။” “အို ကိုယ့်ရည်းစားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး အတူထိုင်နေရတာပဲ ကြည်ကြည်ရာ၊ ပျော်စရာ ကောင်းပါတယ်” “ဟင့်အင်း၊ ကြည်တော့ပျင်းတယ်။ နောက်ဆို ကိုကိုဦးခေါ်ရင် မလာတော့ဘူး” “ဟင် .. ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမ လဲ” ရိုးအလှသူ မြဦီးမှာ ရင်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပင် ပြောချလိုက်သည်။ သူ၏ရင်ထဲတွင်လည်း တကယ်ပင် ညစ်ညူး၍ ကြံရာမရဖြစ် သွားရသည်။
“ကိုကိုဦးကလဲ၊ သူများသမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာပဲဟာ .. ကြည်သွားတော့မယ်” မြဦးကိုကျောခိုင်းပြီးမှ အသံ ကိုနှိမ့်၍ပြောကာ သူ့မျက်နှာကိုမှ လှည့်၍မကြည့်တော့ပဲ ကြည်ကြည်မြင့်မှာ လွယ်အိတ်ကလေး တရမ်းရမ်းဖြင့် ထွက်ခွာသွားလေ ပြီဖြစ်သည်။ “သူများသမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာပဲဟာ” ဆိုသော မြင့်မြင့်ကြည်၏စကားလေးသည် မြဦး၏နား ထဲတွင် ပဲ့တင်တွေထပ်၍ ကြားယောင်နေလေသည်။ ရိုးအလှသော မြဦးကတော့ သူများသမီးရည်းစား တွေသည် သူနှင့် မြင့်မြင့် ကြည်တို့ ကဲ့သို့ပင် ရှိလိမ့်မည်ဟု သူက တွေးထင်ထားခဲ့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ စကားကို မကြားဖူးစဉ်ကတော့ သူ၏စိတ်ထဲတွင် အများတကာ အတွဲတွေလို ဘာမှဆန်းပြားစွာ ရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့။ ခုတော့ သူမသိသော အချက်ကို မြင့်မြင့်ကြည်က ထောက်၍ပြသွားခဲ့လေပြီ။
“ဘာတွေများထူးခြားလို့ပါလိမ့်” ဟူသော ဆန်းစစ်မှုအတွေးက မြဦး၏ခေါင်းထဲသို့ ဝင်၍လာခဲ့ရသည်။ ဒါဆိုရင် သူများ သမီးရည်းစားတွေသည် သူတို့သမီးရည်းစားထက် ဘာတွေထူးခြားနေသည်ဆိုသည်ကို မြဦးတစ်ယောက် သိရှိရန်လိုလာပေသည်။ သိချင်လာတာနှင့်အမျှ သိအောင်လုပ်ရပေတော့မည်။ ထိုသို့အတွေးရှုပ်ယှက်ခတ်ကာနေစဉ်မှာပင် မြဦး၏ခေါင်းထဲသို့ အလင်းရောင်တစ်ချက် ထွက်ပေါ်၍လာရသည်။ ဒါကတော့ သူတို့နှင့်အနီးစပ်ဆုံး သမီးရည်းစားစုံတွဲဖြစ်သည့် ကိုဘသိန်းနှင့် မခင် တိုးတို့စုံတွဲပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မြဦးသည် ကိုဘသိန်းနှင့်မခင်တိုးတို့ စုံတွဲကို သွား၍သတိရလိုက်မိစဉ်မှာပင် နေ့လည်က သူနှင့် သံချောင်းတို့ အတူလျှောက်လာစဉ် ကိုဘသိန်းကြီးက သံချောင်းကို မခင်တိုးထံသို့ စေခိုင်းသံကြားလိုက်ရသည်။ ဒီည ကိုဘသိန်း ကြီးက မခင်တိုးဆီသွားမယ်တဲ့ … သံချောင်းက မြဦးကို အာချောင်ပြီးပြန်ပြောတာကတော့ မခင်တိုးကြီးအိမ်က လူကြီးတွေအလစ် မှာ ခြံထဲကို ည၉ နာရီလောက် ဆင်းခဲ့ရန် ကိုဘသိန်းက မခင်တိုးကို ပြောခိုင်းသည်ဟု မြဦးသိထားရသည်။
ဒါဆိုရင် ကြာပါတယ်၊ ဒီ ညပဲ သူတို့အတွဲတွေ ဘယ်လိုဆိုတာကို မြဦးစုံစမ်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ မခင်တိုးတို့အိမ်ဆိုသည်မှာလည်း တခြားဝေးဝေးလည်း မဟုတ်။ မြဦးတို့အိမ်၏ နောက်ဖက်တွင်ကပ်လျှက်ဖြစ်သည်။ ခြံစည်းရိုးကလည်း ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိသည်မဟုတ်တော့ မြဦးတစ် ယောက် ၉နာရီထိုးသည်နှင့် မခင်တိုးတို့ခြံဖက်ကို မှောင်ရိပ်ခို၍ အသာလေးဝင်လာခဲ့သည်။ မခင်တိုးတို့တအိမ်လုံးမှာ မီးရောင် ဆို၍ ဘာမျှမမြင်ရ။ လူကြီးတွေပဲ မရှိလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် အိပ်ပဲ အိပ်ကုန်ကြလို့လားတော့မသိ၊ တအိမ်လုံး တိတ်ဆိတ်၍ နေသည်။ လဆန်း၁၂ရက်၏ ည၉နာရီထိုး လရောင်က သစ်ရွက်တွေကြားမှာ ဝိုးတဝါးထိုးကျ၍နေသည်။ တွေ့ပါပြီ၊ ခြံထဲရှိ ပိတောက်ပင်ပတ်လည်တွင် ဝိုင်း၍ရိုက်ထားသော ဗြက် ၂ပေခွဲလောက်ရှိသော ခုံပေါ်တွင် ကိုဘသိန်းတစ်ယောက် ခြေတွဲလောင်းချ ကာ ထိုင်၍နေသည်။
မြဦးတစ်ယောက် ကိုဘသိန်းကိုလှမ်း၍ တွေ့မြင်လိုက်ရသည့် တခဏမှာပင် မြဦး၏ဘေးဖက် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ တစုံတစ်ဦး လျှောက်၍လာသည်ကို မြဦးတစ်ယောက် ကိုဘသိန်းကိုလှမ်း၍ တွေ့မြင်လိုက်ရသည့် တခဏမှာပင် မြဦး၏ဘေးဖက် ခပ် လှမ်းလှမ်းမှ တစုံတစ်ဦး လျှောက်၍လာသည်ကို သတိထားမိလိုက်ဖြင့် အနီးတွင်ရှိသော စံပယ်ရုံဘေးရှိ မှောင်ရိပ်ထဲသို့ ပြေး၍ကပ်ကာ ပုနေလိုက်ရသည်။ လှမ်း၍ကြည့်လိုက်တော့ လျှောက်လာသူမှာ မခင်တိုးပင်ဖြစ်သည်။ မခင်တိုးသည် ခပ်သွက်သွက်လေး လျှောက်၍လာရင်းက ကိုဘသိန်းရှိရာပိတောက်ပင်ကြီးဆီသို့ ဦးတည်၍သွားတော့ရာ မြဦးကလဲ ခါးလေးကို ကုန်း ဇက်လေးကိုပုပြီး မှောင်ရိပ်ကို အကာအကွယ်ယူကာ ပိတောက်ပင်ကြီးဘေးရှိ ဇီဇဝါပန်းခြုံ ကြား ဘေးမှောင်ရိပ်ထဲသို့ တိုး၍ဝင်လိုက်သည်။ မြဦးရောက်ရှိသွားသော နေရာမှာ ကိုဘသိန်းထိုင်နေရာနှင့်ဆိုလျှေင် ၅ပေခန့်သာ ဝေးပေမည်။ ထို့ပြင် သူ ရောက်ရှိနေသော နေရာမှာ ပိတောက်ပင်းကြီး၏ အရိပ်ကလည်း ထပ်ဆင့် ထိုးကျ၍နေပြီး ဇီဇဝါပန်းရုံ၏ အရိပ်ကလည်း ရှိနေလေ ရာ အတော်လေးပင် မှောင်မည်း၍ နေလေသည်။
မြဦးတစ်ယောက် ဇီဇဝါပန်းရုံကြီး ဘေးရောက်လာစဉ်မှာပင် မခင်တိုးကလဲ ကိုဘသိန်းကြီး၏ ရှေ့သို့ ရောက်၍လာခဲ့ချေပြီ။ “စောင့်နေတော ကြာပြီလား ကိုသိန်း” “အင်း အတိုးကလဲ ကြာလိုက်တာကွာ၊ လာမှ လာပါ့မလားလို့။” “လူကြီးတွေအိပ်အောင် စောင့်ရသေးတယ် အကိုသိန်းရဲ့” မခင်တိုးက ပြောပြောဆိုဆိုပင် ကိုဘသိန်း၏ဘေးသို့ ဝင်၍ ထိုင်လိုက်လျှင် ကိုဘသိန်းကြီးက ဘာမပြောညာမပြောနှင့် မခင်တိုးကို ဖက်၍ ပါးလေးနှစ်ဘက်ကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် မွှေးကာကြူ၍ နေလေတော့သည်။ မခင်တိုး တော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ။ မြဦးတစ်ယောက်တော့ အသက်ရှူနေတာပင် ရပ်သွားမတတ် ဖြစ်၍သွားရသည်။ အလဲ့ … မခင်တိုး ကလဲ အာဂပင်၊ သူမ၏လက်တစ်ဖက်က ကိုဘသိန်းကြီး၏ ခါးကိုပင် ပြန်၍ဖက်ထားလိုက်သေးသည်။
ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုး၏ မျက်နှာလေးကို မွှေးကြူရရုံဖြင့် အားရပုံမပေါ်သေး၊ သူ၏ နှုတ်ခမ်းထူထူကြီးဖြင့် မခင် တိုး၏နှုတ်ခမ်းပါးလေး တွေပေါ်သို့ ဖိကပ်၍ စုပ်နမ်းနေတော့ရာ ကျန်နေသော မခင်တိုး၏ လက်လေးတစ်ဖက်ကပါ ကိုဘသိန်း၏ ကျောပြင်ကြီးကို ဖက်၍၍ထားပြီး သူတို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အတင်းပင် တိုး၍ ဖက်လိုက်ကြသည်ကို မြဦးက သဲကွဲစွာ မြင်လိုက်ရသည်။ မခင်တိုး၏ မျက်လုံးတွေကလဲ မှိတ်၍သွားသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်သော မြဦးတစ်ယောက် ဘယ်လို ဖြစ်လာသည်မသိ၊ တကိုယ်လုံး ထူပူ၍လာရာက နတ်ကျသလို တုန်တုန်ယင်ယင် ဖြစ်၍လာရတော့သည်။
ဒီအချိန်မှာပင် မြဦးသတိထားမိလိုက်တာက သမီးရည်းစားနှစ်ယောက် တွေ့ရင် စကားတွေ ဖောင်လောက်အောင်ပြောသည် ဟု သူ သိထားသည်မှာ မှားယွင်း၍ နေပါပြီကော။ ကိုဘသိန်းနှင့် မခင်တိုးတို့ စကားတွေဘာမျှ မပြောလိုက်၊ တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းသာ ပြော လိုက်သည်ကို သူကြားလိုက်ရသည်ဟု တွေးတောလိုက်မိသည်။ မြဦးကြည့်နေစဉ်မှာပင် ကိုဘသိန်းက မခင်တိုး၏ နှုတ်ခမ်းတွေ ကို မလွတ်တမ်း ငုံခဲထားရင်းကပင် သူ၏လက်ကြီးတဖက်က မခင်တိုး၏ နို့အုံတွေကို အင်္ကျီပေါ်မှပင် ဆုတ်နယ်ခြေမွှ၍ နေသည် ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ သိပ်မကြာလိုက်သော အချိန်တွင်ပင် ကိုဘသိန်းကြီးက မခင်တိုး၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ခါးမှပွေ့ကာ ခံတန်းပေါ် သို့ ပက်လက်လှန်၍ ချလိုက်လေသည်။
မခင်တိုးတစ်ယောက် ပက်လက်လေးဖြစ်သွားစဉ်မှာပင် သူမ၏ကိုယ်လုံးပေါ်မှ ပါ၍သွား သော ကိုဘသိန်းကြီးသည် လက်ဖက်က မခင်တိုး၏ အင်္ကျီကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ်လိုက်ရာက အင်္ကျီရင်ဘတ် နှစ်ခြမ်းကို ဘယ်ညာဟ၍ ဖွင့်လိုက်သောအခါ ကိုဘသိန်းတော့ ဘယ်လိုနေသည်မသိ၊ မြဦးတစ်ယောက်တော့ ရင်ထဲတွင် ဒိန်းကနဲဖြစ်သွားပြီး သူ၏မျက်လုံးတွေကိုပင် မျက်တောင်ခတ်ရန် မေ့သွားရလေသည်။ ဘော်လီအင်္ကျီအတွင်းမှ ပြည့်အံကာထွက်နေသာ မခင်တိုး၏ နို့အုံသားတွေသည် အိဖောင်း၍ လရောင်အောက်မှာ ဖွေးနှစ်၍နေလေသည်။ မက်မောစရာကောင်းလှလွန်း၍ ကိုဘသိန်းသည် ခေါင်းကြီးကိုငုံ့ပြီး တရှုံ့ရှုံ့ နမ်းနေတော့သည်။ ကိုဘသိန်း၏ လက်ကလည်း အငြိမ်မနေပဲ မခင်တိုး၏ ဘော်လီအင်္ကျီအနောက်က ချိတ်တွေကိုပါ ဖြုတ်နေလေသည်။ ချိတ်များအကုန် ပြုတ်သွားပြီး ဘော်လီအင်္ကျီကို လှန်တင်လိုက်ကာ နို့အုံနှစ်ဘက်လုံးကို လက် ဖြင့်ဆုတ်၍ နယ်ပစ်လိုက်တော့သည်။
နို့ကြီးနှစ်လုံးမှာ လရောင်ဖွေးဖွေးတွင် ဖြူဝင်း၍နေသည်။ ကိုဘသိန်းက စိတ်တွေအလွန်ပင် ထကြွလာပုံဖြင့် မခင်တိုး၏နို့တွေကို အတင်းငုံ့၍ စို့လေတော့သည်။ မြဦးတစ်ယောက်တော့ မတ်တတ်ပင် မရပ်နိုင်တော့၊ ဒူးတွေတဆတ်ဆတ် တုန်လာပေပြီ။ ပြီး တော့ တခါမှမဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးသော ခံစားမှုတွေကလဲ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းရှိန်းဖိန်းဖိန်း ဖြစ်ပေါ်နေလျက် ပုဆိုးတွင်းမှ ဖွားဘက်တော် ကြီးကလဲ တောင်မတ်ပြီး တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေလေသည်။ ကိုဘသိန်းကတော့ တရှူးရှူးတရှဲရှဲဖြစ်၍ လာရာက မခင်တိုး၏ ထဘီ ကိုပင် လှန်၍တင်လိုက်ရာက သူမ၏ပေါင်နှစ်လုံးကြားတွင်ဝင်၍ ဒူးထောက်ကာ ထိုင်လိုက်လေတော့သည်။ မခင်တိုး၏ ပေါင်တံ ကြီးတွေမှာလည်း လရောင်အောက်တွင် ဖြူဖွေး၍နေပြီး တလုံးတခဲကြီးဖြစ်ကာ တပ်မက်စရာကြီးပင်။ သူတခါမှ မမြင်ဘူးလေ သော အရွယ်ရောက်ပြီးမိန်းတစ်ယောက်၏ မမြင်အပ်လေသော ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေကို မြဦးသည် တစ်ခုချင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်နေရလေပြီ။ ဒါ့အပြင် ယခုသူ့ရှေ့ မြင်ကွင်းကလဲ သူကြားဖူးနားဝသာ ရှိခဲ့ဖူးပြီး မမြင်ဖူးခဲ့လေသော မြင်ကွင်းပင်တည်း။
သူမ၏ ပေါင်ဖြူဖြူကြီးနှစ်လုံးကြားတွင် ကိုဘသိန်းက ဝင်၍ထိုင်လိုက်ရာက ဒူးထောက်၍ သူ၏ပုဆိုးကို ချွတ်ချလိုက်တော့သည် နှင့် မခင်တိုးသည်လည်း သူမ၏ ပေါင်နှစ်လုံးကို ဆွဲ၍ ထောင်လိုက် လေတော့သည်။ ဒီအချိန်မှာပင် ကိုဘသိန်းက သူ၏လီးတန်ကြီး ကို ကိုင်၍ လီးတန်ကြီးထိပ်နှင့် မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုလုံးကို ထိကာ အကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် အထက်အောက် စုန်ဆန်ကာ ပွတ်သပ် ပေးနေလေသည်။ “အ … အကိုသိန်း … ဟင့် … တော်တော်ကြာ လူကြီးတွေ နိုးလာရင် ခက် မယ် … ဟင့် …” မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်ဝတွင်လည်း စောက်ရည်များမှာ စိမ့်၍ ထွက်နေချေပြီ။ မခင်တိုးမှာ ဒိထက်ပိုပြီး စိတ်မ ရှည်နိုင်တော့ပေ။ အနေရ အထိုင်ရ တော်တော်ခက်နေပုံရသည်။ မခင်တိုး တစ်ယောက်တည်းပင် နေရထိုင်ရခက်လှသည်မဟုတ်၊ မြဦးသည်လည်း ဒူးတွေ တဆတ်ဆတ် တုန်လာသဖြင့် မတ်တပ်ပင် မရပ်နိုင်တော့ပဲ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လိုက်ရသည်။ ဟော ခု တစ်ခါ ထိုင်၍ ကြည့်ရသည်မှာလည်း အားမရသဖြင့် မြဦးတစ်ယောက် မတ်တပ်ထရပ်ကာ ကြည့်နေပြန်လေပြီ။ မခင်တိုး၏ အခြေအနေကို ရိပ်စားမိလေသော ကိုဘသိန်းကလည်း လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ခုပေါ်တွင် လက်ညှိုး လက်မတို့ဖြင့် အသာလေး ဖိကာဖြဲလိုက်ပြီး သူ၏လီးတန်ကြီးကို တေ့ကာဖိ၍ လိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။
“အ … အမလေး … ဟင်း … အရမ်း … အရမ်းကြီးဘဲ .. အကိုသိန်းကလဲ … ဒီမှာ နာသွားတာပဲ .. ဟွန်း” မခင်တိုးက သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို ချွတ်ကာ မူမူစူစူလေး ပြောလိုက်သည်။ “တော်တော်နာသွားလားဟင် … အကို လောကြီးသွားလို့ပါ” “နာတာပေါ့ .. ဖြေးဖြေးလုပ်လဲ ရတာပဲဟာ” “ခုရော .. ဆက်ပြီးနာနေသေးလား” “ကဲပါ .. မနာတော့ပါဘူး။ လုပ်မှာဖြင့် လုပ် တော့။ လူကြီးတွေ နိုးကုန်ရင် ခက်မယ်” သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲတွင် ကိုဘသိန်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ တဆုံးဝင်လျက် တစ်လစ်ကြီး ဖြစ်နေသည်ကို အားမလိုအားမရ ဖြစ်လျှက် လီးတန်ကြီးကလဲ မလှုပ်မရှားပဲ ငြိမ်နေသောအခါ အဆမတန် ရမ္မက်စိတ်တွေ ပြင်းပြ လာရသော မခင်တိုးက ကိုဘသိန်း မြန်မြန်လိုးစေရန် လူကြီးတွေကို အကြောင်းပြလျက် လောဆော်လိုက်လေသည်။ ဒါကိုပင် မြဦး က မယောင်မလည်ဖြင့် အိမ်ကြီးဆီဘက်ကို လှမ်း၍ ကြည့်လိုက်သေးသည်။
ကိုဘသိန်းကတော့ သူ၏လီးတန်ကြီးကို ညင်သာစွာ ဆွဲ၍ထုတ်လိုက်ရာက စ၍ လိုးနေချပြီ။ ၁၀ချက်မျှ ခတ်ဖြေးဖြေး လုပ် ပြီးသည်နှင့် အားမရနိုင်ဖြစ်၍ လာရသော ကိုဘသိန်းသည် စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်၍ လိုးတော့သည်။ မခင်တိုး ခမျာမှာတော့ မျက်လုံးနှစ်လုံး စုံမှိတ်ထားရင်း ဟင့်ကနဲ အင့်ကနဲပင် ဖြစ်အောင် အားပါးတရကြီးကို ကော့၍ပေးနေတော့သည်။ ဒါ့အပြင် မခင်တိုး က သူမ၏ ဒူးကွေးကာ ထောင်ထားသော ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကို ကုန်း၍ရုန်း၍ လိုးနေသော ကိုဘသိန်း၏ တင်ပါးပြောင် ပြောင်ကြီး ပေါ်သို့ ချိတ်ကာတင်လိုက်ပြီး စောစောကထက်ပင် တိုး၍ ကော့ပေးနေပြန်ပါသည်။ စောက်ရည်ကြည်တွေ အတော်ပင် ရွှဲစိုနေပြီဖြစ်သော မခင်တိုး၏ စောက်ပတ်ကြီးကြောင့် ‘စွပ်’ ကနဲ ‘ပြွတ်’ ကနဲ ‘ဖွတ်’ ကနဲ အသံတွေမှာလည်း တဖြေးဖြေး သိသိ သာသာ ပေါ်ထွက်လာတော့သည်။
မြဦးခမျာတော့ ဆက်လက်၍ကြည့်ဖို့ရာ မစွမ်းတော့ပေ။ သူ၏ တကိုယ်လုံးရှိ အားအင်တွေမှာ လည်း ဘယ်ကို ရောက်သွားသည်မသိ၊ တကိုယ်လုံး ချိနဲ့နေလေပြီ။ ဒါတင်မကသေး၊ ရင်ထဲတွင်လည်း ဟာတာတာ ဆာတာတာဖြင့် အသက်ရှူရတာလဲ ရင်မောကာ ကြပ်နေလေသည်။ ဒါ့အပြင် ရင်တွေလည်း တဒိန်းဒိန်းခုန်၍ နေပြီး ကိုဘသိန်း၏ ဆောင့်ချက် ကြောင့် လှုပ်ခါနေသော မခင်တိုး၏ နို့အုံကြီးတွေကိုပင် ပြေး၍ ညှစ်ကိုင်ပစ်လိုက် ချင်လာလေသည်။ သူ၏အာရုံထဲမှာတော့ မြင့် မြင့်ကြည် ကလေးကိုသာ ပြေးမြင်ယောင်မိနေတော့သည်။မြဦးသည် ရပ်၍ကြည့်နေရာမှ အသာလှည့်ပြီး မှောင်ရိပ်ခိုကာ လာလမ်းအတိုင်း ပြန်လာခဲ့လေသည်။
အပြန်ခရီးမှာတော့ မြင့်မြင့်ကြည်ပြောသည့် “သူများ သမီးရည်းစားတွေဆို သိပ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတာပဲ” ဆိုတာ ဒါကိုပဲပြောတာလားမသိ .. အို .. ဒါပဲရှိတာပဲ၊ ဒါကိုပဲပြောတာ သေချာပါတယ်၊ ကိုဘသိန်းတို့ လုပ်ကြသလိုမျိုး မြင့်မြင့်ကြည်ကို လုပ်ပစ်လိုက်တော့မယ်။ သူပြောတာ ဒါပဲဖြစ်မှာပါ၊ သေချာပါတယ် … အင်း ဒီညကတော့ အချိန်မရှိတော့ဘူး။ မနက်ဖြန်က ကျောင်းပိတ်ရက်ပဲ၊ ဒါပေမယ့် မြင့်မြင့်ကြည်အိမ်က လူကြီးတွေ ဈေးဆိုင်ထွက်ကြမှာဆိုတော့ အိမ်မှာ မြင့်မြင့်ကြည်ပဲ ရှိမယ်။ ငါမနက်ဖြန် သွားဖြစ်အောင် သွားရမယ် ဟု တစ်ကိုယ်တည်းပြောကာ နေလေသည်။
အမှန်တော့ ကိုဘသိန်းနှင့် မခင်တိုးတို့သည် ကိုဘသိန်းက အသက် ၂၄ နှစ်၊ မခင်တိုးက အသက် ၂၂ နှစ်ရှိကြပြီး သမီးရည်းစား ဖြစ် ကြသည်မှာလည်း ၆ နှစ်မျှ ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ ခုလို လင်မယားမကျ ဖြစ်နေခဲ့သည်မှာ တစ်နှစ်လောက်ပင် ရှိနေပြီဆိုသည်ကိုတော့ မြဦး တစ်ယောက် မသိရှာပါပေ။ မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ ၂ယောက်မှာတော့ မြဦးက ၁၈ နှစ်ကျော်ကျော်၊ မြင့်မြင့်ကြည်က ၁၈ နှစ်ပြည့် ခါနီးမျှသာ ရှိနေသေးသည်ကို ပြန်လည် မဆန်းစစ်မိခဲ့ချေ။ ဒါ့အပြင် သူတို့နှစ်ဦးသည် ကာမကိစ္စကို ယခု လက်တည့်စမ်းရန် ကြံရွယ်ရုံသာ ရှိကြသေးပြီး ပြောရမည်ဆိုလျှင် မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပါးဖြူဖြူမို့မို့လေးများကိုပင် တခါမှ မမွှေးကြူခဲ့ဖူးပေ။ ခုတော့ဖြင့် အတုမြင် အတတ်သင်ဆိုတာမျိုးလို မြဦးတစ်ယောက် တည်ငြိမ်နေသော သူ၏ရင်တွင် ဂယက်လှိုင်းများသည် ကြောက်ခမန်းလိလိ ရိုက်ခတ်နေရပြီ ဖြစ်ပါတော့သည်။
ထို့နောက် လမ်းထိပ်ကိုထွက်ကာ သံချောင်းကိုရှာ၍ မြင့်မြင့်ကြည်ထံ စာသဝဏ် ပါးလိုက်သည်။ ပြီးတော့မှ စိတ်ချလက်ချဖြင့် အ မေပေးလိုက်သော မုန့်ဖိုးဖြင့် ဘာဘူကြီးဆိုင်တွင် လက်ဘက်ရည်ဝင်သောက် နေလေသည်။ နေ့လည်၁၂နာရီမထိုးမီမှာပင် မြဦး သည် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ အိမ်ရှိရာသို့ ထွက်၍ လာခဲ့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်တို့အိမ်မှာ တိုက်ခံနှစ်ထပ်အိမ် ဖြစ်သည်။ သူရောက်သွား တော့ အိမ်ရှေ့တံခါးမှာ အဆင့်သင့်ဖွင့်ထားသဖြင့် ခါတိုင်းလိုပင် မြဦးသည် အိမ်ထဲသို့ဝင်လာခဲ့သည်။ အိမ်အောက်ထပ်တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်၍နေသည်။ အိမ်ရှေ့တွင် ဘယ်သူမှမရှိသဖြင့် မြဦးသည် အောက်ထပ်တွင်ပင် ရှိနေသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းရှိရာ သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်။
မြဦးတစ်ယောက် မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းရှေ့သို့ ရောက်ပါပြီ။ တံခါးပိတ်ထားသဖြင့် လက်ဖြင့်အသာတွန်းကြည့်ရာ တံခါးရွက်၂ချပ်သည် စေ့ထားသဖြင့် အလိုက်သင့်ပင် ခပ်ဟဟလေး ပွင့်၍ သွားလေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်ကို မှန်တင်ခုံရှေ့တွင် ထိုင်၍ အလှပြင်နေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ ရေချိုးပြီးခါစတော့ ဟုတ်မည်မထင်။ တံခါးဝကို ခပ်စောင်းစောင်းလေး နောက်ကျောပေး၍ ထိုင်နေသော မြင့်မြင့်ကြည်ထံသို့ မြဦး၏ အကြည့်တွေက ရောက်သွားပြီး တခဏလေးမှာပင် မို့မို့လေး ဖောင်း၍နေသော သူမ၏ ရင်အုံလေးနှင့် ကား၍ အိဖောင်းကာ ပြည့်တင်းနေသော သူမ၏ တင်သားတွေဆီသို့ မြဦး၏ အကြည့် တွေက ရောက်ရှိသွားခဲ့ရလေပြီ။
မြင့်မြင့်ကြည်သည် မခင်တိုးလောက်တော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် မဖွံ့ဖြိုးသေးသော်လည်း သူ့ဟာနှင့်သူတော့ အတော်လေးလှ၍ နေသည်ဟု မြဦးက မှတ်ချက်ချလိုက်မိရင်း မြင့်မြင့်ကြည်၏ အိပ်ခန်းထဲသို့ လှမ်း၍ ဝင်လိုက်ရာ မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ သူ့ဆီသို့ လှည့် အကြည့်ဖြင့် ဆုံကြလေသည်။ “လာ … ကိုဦး … ထိုင်လေ” “အင်း” အခန်းထဲတွင် ထိုင်စရာနေရာရှာလိုက်တော့ မြင့်မြင့်ကြည် အိပ်သည့် ကုတင်လေးတစ်လုံးသာ ရှိလေသည်။ မြဦးကလဲ အရင်မြဦးမဟုတ်တော့သဖြင့် ခပ်တည်တည်ပင် ဝင်၍ ထိုင်လိုက် သည်။ ကုတင်လေးပေါ်သို့ မြဦးတစ်ယောက် ထိုင်ချလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်တည်း မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ မှန်ရှေ့မှထလာကာ မေး လိုက်သည်။ “ကိုဦးက ကြည့်ကို ၂ယောက်တည်းတွေ့ချင်တယ်ဆို?” “အင်းလေ” “ဘာဖြစ်လို့လဲ?” “တို့ သမီးရည်းစားတွေပဲ ဟာ … ၂ယောက်တည်းဆိုတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိတာပေါ့” မြင့်မြင့်ကြည်၏မျက်နှာလေးမှာ ပြုံးစစလေး ဖြစ်၍သွားရာက ပင် မြဦး၏ဘေးသို့ ထိုင်၍ချလိုက်သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်ထံမှ မွှေးပျံ့သော သင်းရနံ့တို့သည် မြဦးဆီသို့ တည့်တည့်မတ်မတ်ပင် ဝင် ရောက်၍ လာရာက မြဦး၏ ရင်ကို ထိုးဆွ၍နေချေပြီ။ မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်ရှိရာဖက်သို့ ငဲ့စောင်းကာ ကြည့်လိုက်မိသည်။
ဒီနေ့မှပင် မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် ခါတိုင်းကျောင်းသွားစဉ်ထက်ပင် ပို၍လှနေသေးသည်။ သေသေချာချာကို ဂရုတစိုက်ဖြင့် အလှပြင်ထားပုံ ရလေသည်။ ပြီးတော့ သူမ၏မျက်နှာလေးက ငုံ့လျှက် ကုတင်ဘေးကြမ်းပြင်ကို စူးစိုက်ကာ ကြည့်နေလေသည်။
သူတို့နှစ်ဦးသားမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် စကားမဆိုမိကြပဲ ငြိမ်သက်၍ နေကြလေသည်။ တချက်တချက်တွင် အခန်းပြူ တင်းပေါက်မှ ဝင်၍လာသော လေပြေလေးများကသာ မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ကို တိုးဝှေ့ဖြတ်သန်း သွားကြသည်။ မြင့်မြင့် ကြည်နှင့် ယှဉ်တွဲထိုင်နေရာက စိတ်တွေလှုပ်ရှားလာသော မြဦး၏ လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ပုံခုံးထက်ဆီသို့ ကျရောက်၍သွားရာ က မြင့်မြင့်ကြည်၏ နုထွေးသော ပုခုံးလုံးလုံးလေးကို သူ၏လက်ဖဝါးဖြင့် ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရင်း “ကြည် ကိုဦးကို ချစ်လား … ဟင်” မြဦး၏ စကားသံကပုံမှန်ထက်ပင် တုန်ခါ၍နေရသလို မြင့်မြင့်ကြည်၏ မို့မောက်မောက်လေး ဖြစ်နေသော ရွှေရင်နှစ်မွှာသည် လည်း နိမ့်ချည်မြင့်ချည်လေး ဖြစ်၍လာလေသည်။ မြဦး၏ တုန်လှုပ်လှိုက်ဖိုသော အမေးစကားကို ကြားရသောအခါ ရင်ထဲတွင် နွေး၍သွားရကာ မြဦးကိုလည်း အံ့သြ၍သွားရသည်။
“အင်း …” ဟု မြင့်မြင့်ကြည်က တိုးတိုးလေး ဖြေလိုက်ရင်းက ရီဝေသော မျက်လုံးအစုံဖြင့် မြဦးကို လှည့်၍ ကြည့်လိုက်သည့် ခဏ မှာပင် မြဦးနှင့် မြင့်မြင့်ကြည်တို့ မျက်နှာနှစ်ခုမှာ ထိလုမတတ် ကပ်၍သွားခဲ့ရပြီး မျက်လုံးချင်းလဲ ဆုံမိကြလေသည်။ ကျန် နေသော မြဦး၏လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ ထပ်မံကျရောက်လာပြီးလျှင် ခဏချင်းမှာပင် မြဦးသည် မြင့်မြင့် ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲယူပွေ့ဖက်လိုက်ပြီး ပါးဖောင်းဖောင်း ဖြူဖြူမို့မို့လေးများအား မွှေးကြူလိုက်တော့သည်။ ချစ်စရာ့ အသွင် မျက်နှာလေးကို မော့၍ပေးလိုက်ရင်းကပင် ရင်ထဲမှ ပြင်းပြလာသော ပီတိအဟုန်တို့ကြောင့် မြင့်မြင့်ကြည်သည် မြ ဦး၏ကိုယ်လုံးကြီးကို ပြန်၍ ဖက်တွယ်လိုက်မိသည်။ ဒီလိုအချိန်မျိုး ဒီလိုအပြုအမူမျိုးကို စိတ်ကူးယဉ်ကာ မျှော်လင့်ခဲ့ရလေသော မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် သူမ၏ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်စုံခဲ့ရပေပြီ။ သူမသည် မြဦးကိုလည်း နားမလည်နိုင်စွာဖြစ်လျက် အံ့သြ ကြေနပ်၍လည်း နေမိသည်။ မြဦး နမ်းသည်ကို အားရကြေနပ်စွာ အနမ်းခံနေသော မြင့်မြင့်ကြည်၏ မျက်နှာလေးသည်ပင် ပြုံး ယောင်လေးသန်း၍ နေလေသည်။
မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ ပါးပြင်နှစ်ဘက်ကိုသာမက နဖူးဆံစပ်လေးများနှင့် မေးဖျားလေးကိုပင် မွှေးကြူကာ နမ်းနေပါသေးသည်။ ပြီးတော့မှ မြဦးက သူ၏မျက်နှာကို အသာခွာကာ မြင့်မြင့်ကြည်၏ မျက်နှာလေးကို စိမ်းစိမ်းလေး တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှ သူ၏ နှုတ်ခမ်းတွေက မြင့်မြင့်ကြည်၏ နှုတ်ခမ်းလုံးလုံးလေးတွေပေါ်သို့ ဖိကပ်ကာ စုပ်နမ်းလိုက်ပါတော့သည်။ နှစ်ဦးလုံး၏ အစိမ်းသက်သက်သာ ရှိလေသော သွေးသားတို့သည် ဟုန်းကနဲ နိုးကြွကာ ထ၍လာခဲ့ရချပြီ။ ဒီလိုနမ်းနေရင်းမှပင် မြဦးသည် မြင့် မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးကို တဖြေးဖြေး အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချရင်း တင်းကြပ်စွာ ပွေ့ဖက်ထားမိသလို မြင့်မြင့်ကြည်ကလဲ မြ ဦး၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို အတင်းပင် သိမ်းကြုံး၍ ပွေ့ဖက်ထားလိုက်မိပါသည်။ အတုမြင် အတတ်သင် ဆိုသလိုပင် မြဦးသည် သူဖိ ထားလေသည့်အတိုင်း လက်တွေကလဲ အငြိမ်မနေပဲ မြင့်မြင့်ကြည်၏ တကိုယ်လုံးကို ပွတ်သပ်နေရုံမျှမက တင်သား လုံးလုံး ဖောင်းဖောင်းတွေကိုပါ ဆုတ်နယ်ပေးနေပြန်ပါသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်မှာတော့ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းပင် သူမကိုယ်သူမ မသိ၊ ဖြင်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သလို ခံစားနေရာမှ တကိုယ်လုံး အားအင်တွေ ဆုတ်လျော့၍ လာရသလို နွမ်းနယ်၍ လာရပါလေတော့သည်။
မြဦးသည် မြင့်မြင့်ကြည်ဝတ်ထားသော အင်္ကျီလေးအပေါ်မှပင် သူမ၏ စူစူမို့မို့ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို ဖိကပ်ကာ နမ်းနေလေသည်။ ပြီး တော့မှ ရင်စေ့အင်္ကျီလေးကို ကြယ်သီးတွေ တစ်လုံးချင်းဖြုတ်ကာ တဆက်တည်းမှာပင် ဘော်လီအင်္ကျီလေးကိုပါ ကြယ်သီး တွေ ဆက်၍ ဖြုတ်ပေးလိုက်တော့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်မှာ ပက်လက်လေး လှန်ကာ ရီဝေသောမျက်လုံးများဖြင့် မြဦးကိုကြည့် လျက် မောင့်မျက်နှာ တစ်ရွာထင် ဆိုတာလို မြဦးပြုသမျှ နုရတော့မည့်အသွင်နှင့် ပက်လက်လေး လှဲနေလေသည်။ သူမ၏ တစ် ကိုယ်လုံး ငြိမ်သက်၍နေသ်ာလည်း သူမ၏ အတွင်းစိတ်များမှာတော့ လှုပ်ရှား၍ နေသည်ဆိုသည်ကိုတော့ လက်ဖျားနှစ်ဖက်ဆီမှ လက်ချောင်းလေးများ၏ လက်ဆစ်လေးများကို တဖျောက်ဖျောက် ချိုးနေသည်ကို မြင်ရခြင်းဖြင့် သိသာနိုင်လေသည်။
“အို .. အကို…” မြင့်မြင့်ကြည်မှာ သူမ၏ မျက်လုံးလေးနှစ်ဘက်ကို စုံမှိတ်လိုက်ရင်း သူမ၏ မျက်နှာလေးကိုလဲ တစ်ဖက်သို့ စောင်းငဲ့ကာ လွှဲလိုက်လေတော့သည်။ မွေးညင်းနုလေးများ စိမ်းမြမြဖြင့် မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား ဖောင်းဖောင်း လေးနှစ်ခု ပြဲဟသွားလေသော အခါတွင်တော့ နီရဲလျှက် အထပ်ထပ် အလွှာလွှာ ပန်းပွင့်ပမာဖြစ်၍ နေလေသော စောက်ပတ် နှုတ်ခမ်းသားလေးများသည် စိမ့်ထွက်နေပြီဖြစ်သော စောက်ရည်ကြည်လေးများကြောင့် ပြောင်လက်ရွှမ်းစိုစွာဖြင့် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ လေသည်။ ထိပ်ဘက်နားဆီမှ စောက်စေ့နီနီရဲရဲလေးကလဲ အသည်းယားစဖွယ် ငေါက်တောက်လေး ထောင်၍ နေတော့သည်။
ပြောင်တင်းကာ အရည်ကြည်လေးများ စိမ့်ထွက်၍နေသော မြဦး၏ လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီးသည် သူမ၏ စောက်ပတ်ဝ အတွင်းသား နု နုလေးများကို ပူနွေးစွာဖြင့် တွေ့ထိလာလေတော့သည်။ မြင့်မြင့်ကြည်သည် အသက်ကို ဝအောင် ရှူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်း၂ဘက်ကို တင်းတင်းလေးစေ့ကာ မာန်တင်းလိုက်မိသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ရမ္မက်ဇောတွေ ပြင်းပြကာ စိတ်တွေမထိန်းနိုင်တော့သော မြဦး သည် သူ၏ သီးတန်ကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ခေါင်းနုနုလေးထဲသို့ တအားပင် ဖိ၍ သွင်းလိုက်လေသည်။
“ဗျစ် .. ဗျစ် .. အား ..အမလေး .. သေပါပြီ … ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ်” မြင့်မြင့်ကြည်မှာ သူမ၏ ခါးသေးသေးလေးသာ ကော့တက် သွားသည်မဟုတ် သူမ၏ ကျောပြင်လေးပါ ကော့၍ သွားရလေသည်။ ပြီးတော့ အသားတွေလည်း တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ စောစော က စောင်းငဲ့ထားသော မျက်နှာလေးကတော့ မော့၍လာပေမယ့် ရှုံ့မဲ့နေလေသည်။ မြဦးသည် ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားပြီး ခြေမ ကိုင်မိ လက်မကိုင်မိဖြင့် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမှန်းမသိအောင် ဖြစ်နေလေသည်။ ပြိးတော့မှ မြဦးသည် သတိရသွားပြီး လီးတန်ကြီးကို ဆွဲချွတ်တော့မလိုလုပ်ပြီးမှ စိတ်ပြောင်းကာ မချွတ်တော့ပဲ လီးတချောင်းလုံးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ပတ်လေးထဲသို့ တဆုံး သွင်းထားလျှက် သူ၏ ကိုယ်လုံးကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေးပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ ကိုယ်လုံးလေးကို ထွေး နေအောင် ဖက်ကာ နို့လေးနှစ်လုံးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် စို့၍ ပေးနေလေတော့သည်။
စောက်ခေါင်းထဲတွင် အတော်ပင် နာအောင့်၍ သွားရသော မြင့်မြင့်ကြည်သည် နဂိုကပင် ရမ္မက်ထန် တဏှာကြီးသော ဗီဇက ပါလာ၍လားမသိ။ နာလွန်း၍ အော်ဟစ်က ညီးတွားလိုက်ရသော်လည်း သူမ၏ အော်ဟစ် ညီးတွားသံအဆုံးတွင် ထိုကဲ့သို့ စောက် ခေါင်းထဲ နာကျင်၍ အောင့်သွားရသည်ကိုပင် ရင်ထဲတွင် ကျေနပ်၍ သွားရလေသည်။ အရှက်တရားဆိုသည်ကတော့ သူမ၏ ရင် ထဲတွင် လုံးလုံးလျားလျား မရှိတော့ပေ။ ကြည့်ပါဦး၊ နို့စို့နေသော မြဦးထံသို့ သူမ၏ နို့လေးတွေကိုပင် ကျောလေး ကော့ကာ ကော့ ကာဖြင့် ပင့်ကပ်ကာ ပေးနေသလို တတ်ကျွမ်းမှု မရှိသေးသဖြင့်လည်း သူမ၏ ပေါင်နှစ်ချာင်းကို ကားသထက်ကားကာ စောက်ပတ် လေးကို မြဦး၏ လီးတန်ကြီးအရင်းသို့ အတင်းပင် ဖိကပ်၍ ပေးနေမိချေသည်။ လက်တဖက်ကတော့ မြဦး၏ ကျောပြင်ကြိးကို သိမ်းကြုံး၍ ဖက်ထားပြီး ကျန်လက်တဖက်က မြဦး၏ ဦးခေါင်းမှ ဆံပင်တွေကို သွယ်လျှ ပြည့်ဖောင်း၍ နေသော လက်ချောင်း လေးများဖြင့် ထိုးဖွ၍ နေလေသည်။
မြဦးမှာ မြင့်မြင့်ကြည် နာလွန်း၍ အော်သဖြင့်သာ အရှိန်သတ်လိုက်ရသည်၊ သူ၏ စိတ်တွေကတော့ အဆမတန် ရမ္မက်တွေထန်နေ ရလေသည်။ လိုးချင်စိတ်တွေ များလာသော မြဦးက မြင့်မြင့်ကြည်၏ အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်သေးသည်။ နာသေးလား ဟု မေး ရန် စိတ်ကကြံလိုက်သေးပေမယ့်လည်း ပါးစပ်က ပြောမထွက်၊ မြင်ရသော အခြေအနကတော့ မြင့်မြင့်ကြည်တစ်ယောက် နာကျင် ပုံမရတော့။ ဆွဲထုတ်လိုက်ပါပြီ၊ မြဦးသည် သူမ၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးတန်ကြီးကို မြင့်မြင့်ကြည်၏ စောက်ခေါင်းထဲမှ ဆွဲထုတ် လိုက်သောအခါ မြင့်မြင့်ကြည်၏ ခါးလေးမှာ ကော့၍ သူမ၏ စောက်ပတ်ဝလေးမှာ လီးတန်ကြီးနောက်သို့ လိုက်ပါလာသယောင် ပင် ရှိနေတော့သည်။ ပြီးတော့မှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ သူ၏ လီးတန်ကြီးကို ပြန်၍ သွင်းကာ ဆောင့်၍ ဆောင့်၍ လိုးလေ တော့သည်။
မြဦး၏ ဆောင့်ချက်ကြောင့် အင့်ကနဲ တချက်ဖြစ်သွားရသော်လည်း မာကြောလွန်းသော လီးတန်ကြီးကြောင့် သူမ၏ စောက်ပတ် အတွင်းသား လေးများမှာ အီစိမ့်၍ သွားရသလို ရင်ထဲတွင်လည်း ကျေနပ်သွားလေသည်။ မြဦးကလဲ ညှာတာရကောင်းမှန်း မသိ တော့ပဲ အတင်းပင် ဆောင့်၍ လိုးပေတော့ရာ စောက်ပတ်အသစ်စက်စက် ပါကင်လေးဖြင့် အလိုးခံနေသော မြင့်မြင့်ကြည်မှာ နာကျင်မှုကို ပူးတွဲခံစားနေရသော်လည်း ဒီလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်တာကိုပင် သူမ၏စိတ်ထဲမှာ အားရကျေနပ်နေလေသည်။
မြဦးကတော့ သူ၏ ကိုယ်လုံးကြိးကို သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မှကြွကာ မြင့်မြင့်ကြည်၏ ကိုယ်လုံးလေး ဘေးတဖက်စီတွင် လက်ကို ထောက်၍ စိတ်ထင်တိုင်း ဆောင့်နေသဖြင့် မြဦး၏ ဆောင့်ချက်များမှာ အထူးပင် ပြင်းထန်လှကာ နှစ်ဦးစလုံးမှာ တခါမှ မကြုံခဲ့ဖူး လေသော ထူးခြားလှသည့် အရသာကို တမေ့တမောကြီး ခံစားနေရလေသည်။ မြင့်မြင့်ကြည်၏ စိတ်ထဲရင်ထဲတွင်လည်း မြဦးကို ခင်တွယ်သည့်စိတ် ချစ်တဲ့စိတ်များ ပို၍ပို၍ တိုးပွားလာရသလို မြဦးကလဲ မြင့်မြင့်ကြည်အပေါ်တွင် ကြင်နာစိတ်များ ချစ်စိတ်များ ပို၍ တိုးလာလေတော့သည်။
မကြာလိုက်ပါချေ၊ မြဦး၏ လိးတန်ကြီးက သူမ၏ စောက်ပတ်ထဲသို့ အတင်းဆောင့်ကာ လိုးသွင်းပြီး ဖိကပ်လိုက်ချိန်မှာပင် မြင့်မြင့် ကြည်ကလဲ သူမ၏ စောက်ပတ်ကို အတင်းပင် ကော့တင်ပေးကာ သူတို့နှစ်ဦးလုံး၏ ခန္ဓာကိုယ်နှစ်ခုသည် တလွန့်လွန့်လူး၍ တွန့် ကာ ပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်သွားရပါလေတော့သည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မကွောကျပါနဲ့